မျိုးဆက်သစ် ကြယ်တပွင့် ~ Nge Naing
Tuesday, September 28, 2010 Nge Naing 86 comments
(ဗွီဒယိုထဲက စကားပြောတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး နားထောင်ရတာ အဆင်မပြေသူများအတွက် မြန်မာလို စာသားနဲ့ ပြန်တင်ထားပါတယ်။)
2010 ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး BBC က အင်တာဗျူးတာကို ဖြေဆိုနေတဲ့ပုံ
ကျွန်မတို့ ပြီးပြတ်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်လက်အမွေခံပြီး ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံးသုံးပါးဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လူရွှယ် အားလုံးနှင့် မျိုးဆက်သစ် သမီးငယ်လေး မဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ဒီပို့ဏ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာမှာ ပြုလုပ်မယ်လို့ နအဖက စတင် ကြေညာ ခဲ့စဉ်က BBC က အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ ကိုမြအေးရဲ့ သမီး အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မဝေနှင်းပွင့်သုန် အဲဒီတုန်းက ဖြေဆိုထားတဲ့ ဗွီဒယို၊ ဗြိတိန် လေဘာပါတီ ညီလာခံမှာ (၂၇-၀၉- ၁၀) ရက်က မဝေနှင်းပွင့်သုန် ပြောကြားသွားတဲ့ ဗွီဒယိုနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံအရေး အတွက် မဝေနှင်းသုန်လှုပ်ရှားတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တခြားဗွီဒယိုခွေ အပါအ၀င် သုံးခွေကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒယိုတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ ဘာကြောင့် ဂုဏ်ပြုတယ် ဆိုတာ အများစုက သဘောပေါက် လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (အစပိုင်းမှာ မပါပေမဲ့ နားထောင်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေ သူများ အတွက် ကျွန်မ အချိန် ရသလောက်နဲ့ မြန်မာလို ရိုက်ထည့် ပေးထားပါတယ်။ ဘာသာပြန်တာ ထောက်နေတာတို့ လိုအပ်ချက် ရှိတာတို့ ဖြစ်ရင် ထောက်ပြ နိုင်ပါတယ်။)
အမေး။ ။ သင့်အဖေဟာ အခုထိ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် ရှိနေတာ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပါရစေ။
ဝေနှင်း၊၊ ၊၊ ဟုတ်ပါတယ် ၆၅ နှစ်နှင့် ၆ လ အကျဉ်းကျနေပါတယ်။ သူက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ၂၀၀၇ နှစ်ကတည်းက အကျဉ်းကနေတာပါ။
အမေး။ ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ ကြေညာလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြညာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို သိပါရစေ။
အဖြေ။ ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ လိုလားနေတဲ့ လိုလားချက်တွေအတွက် ဘာတခုမှ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ သူတို့စစ်အုပ်အုပ်ချုပ်ရေး ဆက်လက်အာဏာ ရရှိနေစေရန်အတွက် ပုံစံချပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ အဖေရဲ့ အမြင်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားတွေကိုလည်း လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်မအဖေလည်း လွတ်ဖို့အာမခံချက်လည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ကျွန်မအတွက်တော့ ဘာမှကိုမဟုတ်ပါဘူး။
အမေး၊။ ။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အသီးသီး မှတ်ပုံတင်နေကြတာကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ သူတို့တွေကို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသဘောရလဲ ဆက်ပြောပါဦး။
အဖြေ။ ။ ဒါကတော့ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုးတော့ ရှိကြမှာပဲ။ ၄၂ ပါတီကျော်လုပ်နေတဲ့ သူတွေမှာ ပါလီမန်ထဲမှာ လုပ်ဖို့ မျှောင်လင့်ချက် တစုံတရာ ရှိလိမ့်မယ် ထင်သူလည်း ရှိမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်စုက ချုပ်ကိုင်ထားတော့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ Campaign အတိုင်း သူတို့ ဆန္ဒကို လူထုကြားထဲ ဘာမှ ဖွင့်ချပြီး ဖေါ်ထုတ်ခွင့် မရပါဘူး။ အကယ်၍ တခြားပါတီတခုခု နိုင်သွားရင်တောင်မှ စစ်အုပ်စုက အာဏာကို ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်နေဦးမှာပဲ ဖြစ်လို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘာမှ အကျိုးမထူးပါဘူး ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေး၊။ ။ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဆိုလိုချင်တာက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တာကို သင်ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောချင်တာလား။
အဖြေ။ ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တာကို ထောက်ခံတယ်မခံဘူး မပြောလိုပါဘူး ဘာလုိ့လဲဆိုတော့ အားလုံးမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြီး ပါလီမန် ထဲမှာ အဖြေရှာရင် အကျိုးထူးမယ် ထင်တဲ့သူ ရှိသလို ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘာမှအကျိုးထူးမှာ မဟုတ်ဘူး ယူဆသူတွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
အမေ။ ။ ဒီလို အမြင်တွေ ကွဲပြားတာရှိတဲ့အပေါ်မှာ သင့်အနေနဲ့ကော ဘယ်လို လုပ်တာက အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆပါသလဲ မဲပေးသင့်မသင့် အပါအ၀င်ပေါ့။
အဖြေ။ ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ကတော့ မဲသွားပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးဘဲ နေသည်ဖြစ်စေ ဘာမှကို ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲ ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအမြင်က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ ကုသသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ စစ်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒါကို တောင်းဆိုနေတာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာနေပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တယောက်တလေမှ မလွတ်သေးပါဘူး။
အမေး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်ဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၂၀ တောင် စောင့်လာခဲ့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် သင့်အဖေကို မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်က သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် သိချင်တာက အနာဂတ်မှာကော ဘယ်လို ရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ကို သိချင်ပါတယ်၊ သင်မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားလို့ ရမယ်ထင်လား။
အဖြေ။ ။ ကျွန်မက အခုဆိုရင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတယောက် ဖြစ်နေတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်သွားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မက အခု အသက်၂၁ နှစ် ရှိတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မအဖေနဲ့ အတူ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကာလက ၉ နှစ်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ကျွန်မ အဖေက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတော့ သူ့ဆန္ဒတွေကို ဘာမှ ထုတ်ဖေါ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ အခုချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ တာဝန်က ကျွန်မအဖေရဲ့အသံ၊ ၂၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့အသံကို သူတို့ကိုယ်စား ထုတ်ဖေါ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Campaigns တွေလုပ်ရာမှာ ကျွန်မရဲ့ အသံဟာ သူတို့ရဲ့အသံ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေး။ ။ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေအတွက် သင့်ရဲ့ အမှာစကားက ဘာလဲ။ ဆိုလိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကဆိုရင် ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို အားတက်သရော အာရုံစိုက်ပြီး အားပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ တဖန်ပြန်ပြီး လျှော့ပါးသွားတာမျိုး ဖြစ်လာတဲ့အပေါ် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ အနောက်တိုင်းသား အတော်များများက သူတို့မှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရှိကြတယ်၊ တကယ်တော့ ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် သော့တချောင်း အဖြစ် အသုံးချပြီး မြန်မာပြည်မှာ ပိတ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တံခါးကို ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိကြဘဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ သူတုိ့ သင်တို့ဟာ သင်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီလို့ရပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မနေ့ (၂၇-၀၉-၁၀)ရက်က ဗြိတိန် လေဘာပါတီ ညီလာခံမှာ စကားပြောနေတဲ့ပုံ (အပေါ်တခုက ကျွန်မ အရင်တင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပြီး Youtube က We fight we win မှာ တင်ထားတာ တွေ့လို့ ပုံကြီးကြီး ကြည့်လို့ရအောင် ခွင့်တောင်းပြီး ကူးလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးရေဟာ နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်နေပါတယ်လို့ ကမ္ဘာကိုပြောနေပါတယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာပြည်ကို စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အာရှင်စနစ် ဆက်လက်အာဏာ ချုပ်ကိုင်ထားဖို့အတွက် ပုံဖေါ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတချို့ စစ်ယူနီဖေါင်းက နေ အရပ်ဝတ်လဲလိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဘာမှမကွာခြားသွားတဲ့ အာဏာရှင်တမျိုးတည်းကို အရပ်ဝတ်နဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ထပ်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေက ဆက်လက် ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ လေဘာပါတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ လေဘာအစိုးရကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားချင်ပါတယ်။ လေဘာအစိုးရ (UK) ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အတူအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံတဲ့ အကြောင်း ကြေညာတဲ့ ပထမဦးဆုံး အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ဟာ (စစ်အစိုးရအပေါ်) ပစ်မှတ်ထားပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂကို ဦးဆောင်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့ဟာ (လေဘာအစိုးရဟာ) (စစ်အစိုးရအပေါ်) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်ရောင်းချပေးမှု ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ဦးဆောင်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း) မစ္စတာ ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း) မစ္စတာ ဒေးဗစ်မီလီဘန်းတို့ကို ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုမှာ ခုလို ကိုယ်တိုင် အားသွန်ခွန်စိုက် စိတ်ဝင်တစား အကူအညီပေးမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) ။ ဒီအတွက် ကျွန်မတို့ တကယ်ပဲ ၀မ်းမြောက်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ အခုပြောတဲ့အတိုင်း မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့မှာ UN အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဆီက မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွေ မကြာခဏ လက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ်လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ဂတိမတည်ဘူး။ UN ကလည်း အခြေအနေ အပြောင်းအလဲကို စောင့်ကြည့်ရအောင်လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ စောင့်ကြည့်နေစဉ်ကာလမှာပဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ အသက် ဆက်လက် ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်။ သူတို့ စောင့်ကြည့်နေစဉ်ကာလမှာပဲ အမျိုးသမီးတွေ ဆက်လက်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတယ်။ သူတို့ စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ကျေးရွာတွေ နောက်ထပ်မီးရှို့ခံနေရတယ်။ မျိုးဆက်တခုပြီးတခု ကလေးတွေဟာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကာ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကလေးဘ၀တွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ UN နဲ့ တခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ အစိုးရတွေဟာ ဒါကို လစ်လျူရှုကာ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘဲ နေမြဲတိုင်း နေနိုင်တယ်။ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဆက်လက်ပြီး လက်ခံနေလို့ မဖြစ်ဘူး။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးသွားရင် ကျွန်မအဖေတို့ကို ထောင်ထဲ သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အပါအ၀င် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပြီး မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အားလုံး တရားဝင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ကျမအဖေကို ကျမတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမဟာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါစေ သူဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်မ သိနေတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အောင်ပွဲကို ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ဒီအတွက် သင်တို့ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့ဟာ တောင်အာဖရိကကို အကူအညီပေးဖို့အတွက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက်လည်း အကူအညီပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး ၁၉ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား အပိုင်း (၇) မှာ ကိုမြအေး ပြောထားတာ ပါတဲ့ဗွီဒယိုကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: သတင်း,အင်တာဗျူး
September 28, 2010 at 8:04 PM Reply
ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း
ရှက်မိတယ် မျှဝေပေးတဲ့ အန်တီငယ်နိုင်ရော
September 28, 2010 at 8:53 PM Reply
မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိသလို ဒီခလေးမလေးရဲ့ ရဲရင့် ပြတ်သားမှုကို ချီးကျူးမိပါတယ်...
September 29, 2010 at 12:05 AM Reply
Thanks so much for this post Ama.
I am very very proud of her speak out like that in front of an audience on behalf of our Burmese people to let the world know what we really face with in Burma. When I was watching it, my tears welled up and rolled down on my cheek automatically. No hope for our future and new generations as long as Junta will go on running the country.
Thank you very much WHPT. You areagreat talent speaker. Terrific!!!
September 29, 2010 at 12:19 AM Reply
မြန်မာလိုပြန်ထားပေးတာကို ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် နားလည်သလောက်တော့ နားထောင်ပြီး ကြည့်သွားသေးတယ် ကျေးဇူးပါ ပြီးတော့ ဒီခလေးမလေးရဲ့ အစွမ်းစကို လေးစား ဂုဏ်ယူမိတယ်
September 29, 2010 at 1:33 AM Reply
September 29, 2010 at 7:19 AM Reply
အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့ တသားတည်းကျတဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ ဆရာကြီးလုပ်တာ မပါ၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်စွာ ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို ရဲရဲရင့်ရင့် ပြောသွား လုပ်သွားတဲ့ တာဝန်ကျေတဲ့ သမီးလေးကို လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်။
အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်း လောင်းရိပ်ကင်းကင်းနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးကို ဆထက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
September 29, 2010 at 12:30 PM Reply
Toee Nanda says:
September 29, 2010 at 12:43 PM Reply
You are very racist, in fact, she isalot smarter then you and she is trying to make democracy, and your buddhist and she's muslim. So you are technically trying to stopamuslim making peace ON YOUR OWN COUNTRY. I find that ridiculous, and that also techically means your on the BURMESE GOVERMENT's side. Because your stopping democracy just like the Burmese Goverment. Oh and if your going to tease me because of my spelling, I don't find that offensive, because 100 000 000 million other
people will and tease you for being racist and stopping democracy, in fact I don't think they will tease you, in fact they might be frustrated or angry. And if she does make democracy, you better not leave your house, I am not assaulting you but you better not leave your house
- Toee Nanda
September 29, 2010 at 1:06 PM Reply
(So you are technically trying to stopamuslim making peace ON YOUR OWN COUNTRY.)
လူတစ်ယောက်ကို စကားပေါ်မှာပဲ ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့? ကောက်ကျစ်တဲ့သူဟာ စကားကိုချိုသာအောင် ပြောကြတယ်။ လူလိမ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း အထင်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။ သူ့အဖေကို ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး လိမ်တဲ့သူကို မင်းယုံသလား? မင်းတို့ကောင်တွေကိုငါမေးမယ်။ ကုလားတွေက ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုပြီး မြန်မာပြည်ထဲ ကုလားတွေ ရောက်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မင်းတို့တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ? ငါ့နဲ့အတူတူ စစ်ဗိုလ်တွေအများကြီး လက်တွဲပြီး ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ ကုလားတွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အသံမထွက်ပဲ ကုလားထိမှ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်တာလား? တခြားဟာတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ အရေးမကြီးလို့ပါ။ ယောကျားမှန်ရင် ကုလားထိမှနာတဲ့သူလားဆိုတာ အမှန်အတိုင်း ဖြေပေးပါ။
p.s. ဖက်ဆစ်ထက် လူပိုသတ်တဲ့ စံနစ်ကို ပြပါဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ပါပဲ။ နအဖထက်လဲ ဒီမိုအစိုးရတွေဟာ အများကြီးဆိုးပါတယ်။ အဲလောက် ဆိုးသွမ်းတဲ့ စံနစ်ကို ဥာဏ်မရှိတဲ့သူတွေပဲလိုချင်တာပါ။ ကျုပ်က ဒီမိုဝါဒကို လက်မခံဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား။
September 29, 2010 at 1:43 PM Reply
September 29, 2010 at 3:14 PM Reply
Is she really muslim? Please kindly let us know.
September 29, 2010 at 5:48 PM Reply
မင်္ဂလာပါ။ လာလည်သူ အားလုံးကို ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ကျွန်မ အခုမှ အကြောင်းပြန်ရတာ ဆောရီးပါ။
-Anonymous (29, 2010 12:19 AM) ကျွန်မ မြန်မာလို ပြန်ထားပေးပါတယ်နော့်။ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါစေ။
-Anonymous (29, 2010 12:30 PM) and Anonymous (29, 2010 3:14 PM) ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ အတူတူ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးဟာ မူစလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်တော့ သူ့သမီးလေး မဝေနှင့်ပွင့်သုန်ကလည်း မူစလင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို လက်ခံကျင့်သုံးရင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊မ၊ အသားအရောင် ဘာတခုမှ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ အားလုံးဟာ တန်းတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မခွဲခြားမှပဲ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ နိုင်ငံကို ညီညီညွတ်ညွတ် ထူထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်မည့် နိုင်ငံတခုမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေဆီက စီးဆင်းဆင်းလာတဲ့ ဥပဒေသာ အဓိကဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘာသာကမှ ဥပဒေရဲ့ အပေါ်မှာ မရှိစေရတဲ့အတွက် ဟင်ဒူ၊ မူစလင်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘာဘာသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းရှိပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် ထားတဲ့ စေတနာမှန်ဖို့ပဲ အရေးကြီးကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။
-Toee Nanda အပါအ၀င် ဘယ်သူမှ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကို အကြောင်းမပြန်စေချင်ဘူး။ သူ့မှတ်ချက်က ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ကြာကြာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
-ကလေးမလေးကို ချီးကျူးထောပဏာ ပြုသွားကြတဲ့သူတွေကိုတော့ ခံစားမှုချင်း ထပ်တူကျကြလို့ နှလုံးသားချင်း နားလည်နေကြပြီမို့ အထွေအထူး ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး။ တော်တဲ့သူကို တော်ကြောင်း ချီးကျူးတာ၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုတာဟာ သာမန်စိတ် ရှိသူတွေအတွက် အဆန်းမှ မဟုတ်ဘဲ။ စိတ်ပုပ်၊ စိတ်ယုတ် ဒါမှ မဟုတ် စိတ်မူမမှန်သူတွေပဲ တော်တဲ့သူကို ချီးမြောက်တာကို မနာလို သ၀န်တို ဖြစ်ကြ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကြနဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် အကုသို်လ်တွေ ဖြစ်လိုက်ကြတာ သနားစရောတော့ အကောင်းသား။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသက္ကာပါပဲ။
September 29, 2010 at 6:08 PM Reply
ABC has leftanew comment on your post "မျိုးဆက်သစ် ကြယ်တပွင့်":
ခလေးမလေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိမ်းနဲ.အပြော ကိုသဘောကျမိပါတယ် ဒါပေမဲ့ Myanmar လို.တရားဝင်ပြောင်းပြီးမှ Burma လို.ဆက်ပြီး သုံးတာတော့မဟုတ်သေးဖူးလေ ၊ အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် အီးယူနိုင်ငံတွေက ခုထက်ထိ Burma လို.ခေါ်နေသေးတာကိုသတိထားမိပါရဲ့ ၊
Burma ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်က ပေးခဲ့တဲ့ အမည်ပါ န၀တလက်ထက်က Myanmar လို.တရားဝင် ပြောင်းခဲ့တာကို လက်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်း Myanmar လို.တရားဝင်လက်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ န၀တ ၊ နအဖ ကိုထောက်ခံတာ ၊ မထောက်ခံတာ ထက် Myanmar လို.အမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ ရန်ကုန်ကို အင်္ဂလိပ်အခေါ် Rangoon ထက် Yangon လို.ခေါ်တာကပိုပြီး သဘာဝကျပါမယ် နအဖပြုတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီရခဲ့ပြီးရင် နိုင်ငံအမည်၊ မြို.အမည်တွေကို Burma, Rangoon လို.ပြန်ပြောင်းပြီး ခေါ်ကြမှာလား ၊
ခလေးမလေးအနေနဲ. Burma လို.ပြောနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ရှေ.မှာ Myanmar လို.မပြောရဲတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ နိုင်ငံအမည်ကို အင်္ဂလိပ်တွေအလိုကျ သုံးသွားတယ်လို.ပဲ သုံးသပ်မိပါတယ် သူ.အနေနဲ. Myanmar လို.သုံးနှုန်းရဲတဲ့ သတ္တိရှိခဲ့ရင်တော့ပိုပြီး လေးစားမိပါမယ် ၊
တကယ့်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အရေးကို ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း (အစိုးရ နှင့် အတိုက်ခံတို.) သဘောထားကြီးစွာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာ ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်၊ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်ပေးနိုင်ပါဖူး၊ စီးပွားရေး sanctionsဆိုပြီး စွတ်အော်နေလို.လည်းမရပါဖူး နအဖ နှင့် အပေါင်းအပါတွေကို ဗီဇာတွေပိတ်၊ ဘဏ်တွေမှာ သူတို.ရဲ့ account တွေကို freeze ဆိုရင်ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အ၀တ်အစားတင်ပို.မူ.ပိတ်ခဲ့လို. အထည်ချုပ် စက်ရုံတွေပိတ်ခဲ့ရပါတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ sanction တွေကို အားမပေးသင့်ပါဖူး ၊ ဒီမှာကြုံတုန်း ပြောချင်တာက စင်ကာပူက ငပေါဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် ၊ သူ.အပြော အရ သူက နအဖကို ဘာ sanction ပဲလုပ်လုပ် ထောက်ခံတယ်တဲ့ ၊ အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တော့ သူ.ဘလော့မှာကွန်မန်.မရေးခဲ့မိပါဖူး ၊ (အဲ့ဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့သူ နအဖ နှင့်အပြိုင် -ဆန်ကုန်မြေလေး-ကလဲ ဒီလောကကြီးမှာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်)
နောက်ဆုံးတော့ မဝေနှင်းပွင့်သုန် Speech အပြီးမှာ လေဘာပါတီဝင်များက လက်ခုတ်တီး ကြတာက Oprah Winfery talk show မှာ ပရိတ်သတ်များလက်ခုတ်တီးတာနဲ. ဘာမျှ ခြားနားလှမည်မဟုတ်ပါ၊ အင်္ဂလန်ရှိ လေဘာပါတီကလည်း ဘာမျှမကူညီနိုင်ပါ ၊ မြန်မာပြည်အရေး မြန်မာများကသာ ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊
မှတ်ချက် ။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့တွင် ကျွန်တော်မန်.ထားသည်ကို edit အနည်းငယ် လုပ်ထားပါသည် ။
September 29, 2010 at 6:44 PM Reply
Because we want to know her race.
I understand that what you really want to explain to us.
But,most of the people are do not want to welcome the Muslim.
September 29, 2010 at 8:00 PM Reply
ခလေးမ ဒါလောက်တော်တာကို မနာလိုဖြစ်ပီး မနိုင်နိုင်ရာ ရှာပီး ဝေဖန်နေတဲ့ သူတွေလည်း အများသား...ဟားဟား ရယ်ရတယ်ကွာ။ ဘယ်နောက်ပေါက်လူကြီးမှ သူ့လို ထိထိမိမိ မပြောတတ်ကြတာ ဝန်ခံလိုက်ကြစမ်းဘာာာာ။ ကိုယ်ကိုတိုင် အရည်အချင်း မရှိဘူးဆိုတာ ဝန်ခံကြပီးရင်တော့ ကိုယ့်သားသမီးတော့ကိုယ် ထက်မြက်အောင် လေ့ကျင့်ပေးလိုက်ကြအုံး။ မိဘတာဝန်လေးတော့ ကျေးပြွန်ပေးကြပါဗျား။ သူများ သမီးတော်တာကို မှိုင်းပေါင်းစုံတိုက်ပီး နှာခေါင်းရှုံနေမဲ့အစား။
September 29, 2010 at 8:10 PM Reply
ABC ရဲ့ မှတ်ချက်က မေးလ်ထဲမှာ ၀င်နေပြီး မှတ်ချက်ထဲမှာ မတွေ့ရလို့ ကျွန်မ ပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပြောထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကတော့ ပြောရင် အရှည်ကြီး ပြောရမှာမို့ ခံယူချက် မတူတာကို ဒီနေရာမှာ မဆွေးနွေးတော့ဘူး နောက်ကြုံရင်တော့ ပို့စ်တခုခုနဲ့ ကြုံရင်ဆွေးနွေးမယ်။ အခေါ်အဝေါ် ကိစ္စကို ကျွန်မ နည်းနည်း ပြန်ဆွေးနွေးချင်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို Burma လို့ ခေါ်တာ မြန်မာလိုမဟုတ် ကျွန်မတို့ ခေါ်တာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ န၀တ၊ နအဖက မြန်မာလိုကိုပဲ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကို ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူး သူ့လူမျိုးက သူခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲ သူခေါ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ အင်ဒီယန်းကို ကုလား၊ Chinese ကို တရုတ်၊ ထိုင်းကို ယိုးဒယား၊ French ကို ပြင်သစ်၊ ဘေဂျင်းကို ပီကင်းလို့ သူ့လူမျိုး ခေါ်တာနဲ့ရော အင်္ဂလိပ်တွေ ခေါ်တာနဲ့ပါ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ကျွန်မတို့ ခေါ်ချင်သလို ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က China ကို တရုတ်ပြည် ခေါ်တာ Bejinn ကို ပီကင်းခေါ်တာ အင်္ဂလိပ်က လာပြီး မှားတယ်လို့ ပြောလို့ မရသလို အင်္ဂလိပ်ကလည်း မြန်မာလို မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်လို Burma, မြန်မာလို ရန်ကုန်မြို့ကို အင်္ဂလိပ်လို Rangoon လို့ ခေါ်တာ မှားတယ်လို့ ပြောလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါကတချက်ပေါ့ နောက်တခုက န၀တဟာ တရားမ၀င် အာဏာသိမ်းထားတဲ့ အစိုးရဖြစ်လို့ နာမည်ပြောင်းတာ သူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ သူပြောင်းထားကို ကျွန်မတို့ အသိအမှတ်မပြုလို့ သူပြောင်းထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့ လိုက်မခေါ်ဘူး။ အဲဒီနှစ်ချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကလည်း Burma, ရန်ကုန်မြို့ကလည်း Rrangoon လို့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်နေတာ ဖြစ်တယ်။
Anonymous ရေ - သူများကြိုဆိုဆို့ မကြိုဆိုဖို့ထက် ကြိုဆိုသင့်၊ ဂုဏ်ပြုသင့်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိနေတဲ့ မျိုးဆက်သစ် သမီးငယ်လေး မဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊မ ခွဲခြားဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကြိုဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
September 29, 2010 at 8:43 PM Reply
်At the part you said "bad people usually pretend to talk nicely", you haveadoneavery good job saying that. :) you have just said that Buddha's are bad people, Good Job! :) And I also like your picture.
For that lady's dad "Mya Aye" how you said "do you beileve he is in the
88th generation student leader?". To be honest with you I don't really care who he is. Also when you said "why are you quiet when the kalars are saying lies, but when I say something you get angry". To be honest with you I also do hate bad kalars, but the lady is trying to make democracy!!!! what are you doing!!! staying at your house, and have nothing better to do then to comment on this blog? some kalars are bad I agree with you. If you have anything to attack back, please comment I would love to talk you :) And by the way, what do you do foraliving? :)
September 29, 2010 at 9:15 PM Reply
မငယ်နိုင် ဘာသာပြန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်သွားတာလေးတချို့ကို အကြံပေးလိုပါတယ်။ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်မရှိလို့ မပြင်ဆင်နိုင်သေးရင်လဲ၊ စာဖတ်သူများ ဒီကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ဖြည့်စွက်သဘောပေါက်နိုင်အောင် ရေးလိုက်ပါတယ်။
လေဘာပါတီရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း) နာမည်ဟာ Gordon Brown ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း) နာမည်ကတော့ David Miliband ဒေးဗစ်
မီလီဘန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဘာသာပြန်ချက် အလွဲလေးတွေရှိပေမယ့် စာပုဒ်နံပါတ် ၇ မှာ ((အခုအချိန်မှာ ကျွန်မဟာ အိမ်ကို ဆုံးရှုံးလုနီးပါး အချိန်အခါမှာ ရောက်နေပါပြီ၊)) အစား (There are times, I almost lose hope.) ((တခါတလေ ကျမမှာ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သလောက်နီးပါး ခံစားရမိပါတယ်)) နဲ့အစားထိုးပြီး။ (There are times I think, I will never see my father again in my life.) ((တခါတလေ ကျမအဖေကို ကျမတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်))လို့ ရေးသင့်ပါတယ်။ (But I think of his bravery.) ((ဒါပေမယ့် ကျမဟာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို အမှတ်ရနေပါတယ်)) ((ဒီနေရာမှာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို သတိရရင်း(နှလုံးသွင်းရင်း)နဲ့ အထက်ကမျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုကို ချေဖျက်ရတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဘာသာပြန်စကားချပ်))။ ဒါကတော့ သတိပြုမိတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အချိန်ရရင် ဆက်စစ်ပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
September 29, 2010 at 9:27 PM Reply
သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြည်သူ။ ကျွန်မ ဘာသာပြန်တာရော ဝေါဟာရရွေးတာပါ ကျွန်းကျင်သူ မဟုတ်ပေမဲ့ Face book မှာ တခြား မောင်လေး ညီမလေးတွေ တင်ထားတဲ့ ဗွီဒယိုမှာ မြန်မာလို ပြန်ထားတာ သိချင်တယ်ဆိုလို့ အတော်များများ လာရေးကြတာ တွေ့လို့ စေတနာအရ ပြန်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါပြီ။ Hope နဲ့ Home က ကျွန်မ နားကြားလွဲတာ ဖြစ်တယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဘာသာပြန်ထောက်တာနဲ့ နာမည်တွေကတော့ Gordon Brown က စာလုံးပေါင်းမှားတာ၊ David Miliband က Surname ကို နားမလည်လိုက်လို့ တမင်ချန်ထားလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ အခုတော့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ နောက်တွေ့ရင်လည်း ပြောပါ။ ကျေးဇူး များစွာ တင်ပါတယ်။
တော်တော်တော်ရေ ဒါတောင်မှ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊မ ခွဲခြားတာ လက်မခံဘူးဆိုလို့ ခွေးလိုလို ကလေးလိုလို တယောက်ကလွဲပြီး တခြားသူတွေ တော်တော်နဲ့ လာမရေးလိုဘူး။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မလည်း ၀န်ခံတယ် ကျွန်မတို့ ဒီကလေးမလေးလောက် မတော်ခဲ့သလို ကျွန်မရဲ့မျိုးဆက်ကိုလည်း သူ့လောက်တော်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ချင်မှ နိုင်မယ်၊ တော်တဲ့သူကို တော်တယ်ဆိုတာ လက်ခံအသိအမှတ်ပြုပေးဖုိ့၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုဖို့ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီကလေးမလေးအတွက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။
September 29, 2010 at 11:28 PM Reply
I will like to take this opportunity to say my thank you to Labor Party for it's support while in government. The Labor government was first of the one governments in the world (to) reject(ed) the election for the sham that they are. You took the lead in pushing for stronger, targeted economics sanctions from EU. You took the lead in pushing for global arms embargo. I will like to say my special thank you to Mr. Gordon Brown and Mr. David Miliband as Prime Minister and Foreign Secretary, to take strong such personal interests in helping our struggle for freedom. We are very greatful.
ဆောရီး မငယ်နိုင် အချိန်မရတာရယ်၊ မငယ်နိုင် ဘယ်လိုသဘောထားမယ်မှန်း မခန့်မှန်းနိုင်တာရယ်၊ အခုတော့ စာပုဒ်နံပါတ် ၄ ကို နဲနဲပြောလိုပါတယ်။
rejected the election for the sham that they are. (အတုအယောင် အလိမ်အညာဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို)
သင်တို့ဟာ (စစ်အစိုးရအပေါ်) ပစ်မှတ်ထားပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂကို ဦးဆောင်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့ဟာ (လေဘာအစိုးရဟာ) (စစ်အစိုးရအပေါ်) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်ရောင်းချပေးမှု ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ဦးဆောင်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း) မစ္စတာ ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း) မစ္စတာ ဒေးဗစ်မီလီဘန်းတို့ကို ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုမှာ ခုလို ကိုယ်တိုင် အားသွန်ခွန်စိုက် စိတ်ဝင်တစား အကူအညီပေးမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျမတို့ အလွန်ပဲ ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ ((စာပုဒ်နံပါတ် ၄ မှာ တချို့ကို အဓိပ္ပာယ်တိကျလိုပါက အစားထိုးသင့်တာတချို့ကို အကြံပြုပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ))။
September 30, 2010 at 1:23 AM Reply
(you have just said that Buddha's are bad people, Good Job! )
မင်းဟာလေ.. ၀ါဝါ မြင်တာနဲ့ ချေးနဲ့ရွှေကို မခွဲခြားနိုင်တဲ့အဖြစ်ပါလား။ ကလိမ်ကကျစ်တွေ စကားလုံးလှလှပြောတယ်ဆိုတာနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကို မကောင်းဘူးလို့ မှတ်ချက်ချတာ . . . အရူးတစ်ယောက်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ချေးနဲ့ရွှေခွဲနိုင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်အောင် အရင်ကြိုးစားစမ်းပါ။ မင်းက ငါ့ကို တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်လဲ မေးခွန်းထုတ်နေတယ်? ငါရှင်းပြပြီးပြီ။ ကုလားဆိုးတွေ ရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့ လိမ်တုံးက တက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စလုံးလုံး မပြောရဲတော့တာ သတိမထားမိဘူးလား? ကုလားထိမှ ဆတ်ဆတ်ထိနာတဲ့ကောင်က ငါ့ကို လာပြီး ယှဉ်လို့ရမလား? ငါက မင်းတို့လို မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်ခွဲပြီး မကြီးမငယ် စောက်တင်းပြော စောက်ရန်ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ကုလားမကို မင်းက အထင်ကြီးရအောင် နိုင်ငံအတွက်လုပ်တယ်လို့ ဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲ? သူ့ကိုယ်ကျိုးနဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒအတွက် လုပ်တာပါ။ ဥာဏ်မရှိတဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေ ကုလားမကို အထင်ကြီးနေတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီမိုငတုံးတွေက စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုမရှိပဲ ပြောသမျှယုံပြီး လိမ်သမျှ ခံနေရတဲ့သူတွေဆိုတာ အားလုံးသိနေတာပဲ။ ကုလားမကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့နေတာ ရာဇတ်နဲ့ မောင်ထွေး ကုလား ၂ ကောင်ကို အာဇာနည်ပေးတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ဘာများကွာလို့လဲ? ၈၈တုံးက ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်လို့ လိမ်တဲ့ ကုလားလိမ် မြအေး။ သူရဲ့သမီး ကုလားမက မြအေးအတွက် ကူလိမ်ပေးနေတဲ့ ကိစ္စကို ဂရုမစိုက်ဘူးလိုပြောတော့ . . . မင်းစိတ်ဟာ ပုံမှန်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ငါဘာလုပ်လဲ မမေးနဲ့။ ငါဘာလုပ်လုပ် မင်းအပူတပြားသားမှ မပါဘူး။ မဆိုင်တာတွေ မမေးနဲ့။ ငါပြောတဲ့အချက်အလက် မှားရင် မှားတယ်ပြော။ မှန်ရင် အမှန်ကိုလက်ခံပါ။ ရှင်းလား?
ဥဏ်ရည်နိမ့်ပါးသော ဒီမိုငတုံးများကို နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ရမှ ကျေနပ်သည့်
သူများ သမီးတော်တာကို အနာလိုဘူး ရှိရှိသမျှမှိုင်း အကုန်ုတိုက်မယ်။ နှာခေါင်းရှုံ့မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောကော သောကော လုပ်မယ်။ အို အမယ်မင်း ရှက်လိုက်တာ၊ နအဖ အောက်ဆွဲလေး၇ာ။ အရည်အချင်းက ဒါအကုန်ဘဲလား။ မျိုးချစ်ကြီး။ သွပ်သွပ်..သွပ်။
September 30, 2010 at 6:15 AM Reply
(ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောကော သောကော လုပ်မယ်။)
September 30, 2010 at 7:40 AM Reply
okay, you can't separate poo and your face, impossible I tried.
Okay lets figure out what I like and what you like and what Buddha likes:
Peace, Democracy, Non-wars, Bogyoke Aung San,
Peace, Respect, Kind, Honest, Love,
What the Burmese Goverment likes:
Wars, unpeacefulness, guns.
And yet you are saying I made Buddha feel negative. Nice brain you got there.
First of all, you don't beileve in Aung San Su Kyi, and yet your both Buddhist. But Aung San Su Kyi is more Buddhist and have more similarities of Buddha than you, in fact im not even sure if your human. Oh and YOU ARE WRONG. I beileve in the lady because she is working for the Good Side of Burma and meeting the Prime Minster of U.K and doing many campaings, and you are working onachair going on people's blog and assaulting them. And your Buddhist. Be Muslim, better for you.
September 30, 2010 at 7:46 AM Reply
But I cannot say the same about United Nations. We have seenalot of statements about concern from the UN Secretary General, but no action. Again and again the regime in Burma gives promises of reform that they never keep. Again and again the United Nations says let wait and see if they change. While they wait and see, political prisoners die in prisons. While they wait and see, women are raped. While they wait and see, more villages are burnt. Generations after generations of children have to grow up in poverty and fears, their childhood lost. The UN and other countries' governments seem content to sit back and do nothing. These things cannot be allowed to continue. The generals in Burma, they are not immune to pressure. It's just that the right kind of pressure hasn't been applied yet.
စာပုဒ်နံပါတ် ၅ မှာ ((ကြိမ်ဖန်တရာတေအောင် မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ့မယ်လို့ ဂတိပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဂတိမတည်ဘူး။ ကြိမ်ဖန်တရာတေအောင် UN ကလည်း အခြေအနေပြောင်းလဲလာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရအောင်လို့ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ((ဤနေရာတွင် Why ဟု မေးခွန်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ While ဟု ဆိုထားတာဖြစ်လို့))။ သူတို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ဆက်လက်အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်။ သူတို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ အမျိုးသမီးတွေ ဆက်လက်မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတယ်။ သူတို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ကျေးရွာတွေ နောက်ထပ်မီးရှို့ခံနေရတယ်။ ((လတ်တလော ဒါလောက်ပဲ ပြင်ဆင်စရာတွေ့ရပါတယ် မငယ်နိုင်ခင်ဗျား၊ တခြားစာပုဒ်တွေမှာ အဓိပ္ပာယ်ထူးထွေစွာ ကွဲလွဲမှုမတွေ့ရှိပါ၊))
ဒီ ဇော်မျိုးဆိုတဲ့မောင် Canucks တွေနဲ့နေထိုင်ပြီး၊ Loonie dollar တွေကိုသုံးစွဲ အသက်ရှင်နေရသူမို့လို့၊ ကျပ်မပြည့်တာကတော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ထူးဆန်းနေတာက ဘာအလုပ်လုပ်ကိုင်စားလို့ ဒီလောက်အချိန်ပိုတွေရနေပြီး၊ အားအားယားယား ဇရပ်နံရံတိုင်းမှာ အရူးစာရေးခြစ်ထားသလို၊ ဘလော့ဂ်တကာလှည့် ချောက်ချီးချောက်ချက်တွေ ရေးခြစ်နေတာ တလလဲမဟုတ် တနှစ်လဲမဟုတ်ဆိုတာပါ။
September 30, 2010 at 8:57 AM Reply
ဝေနှင်းပွင်.သုန်က မူဆလင်ကုလားဆိုတာကို သေသေချာချာ ပြန်ပြောပြပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မငယ်နိုင်ပြန်ပြောတဲ.အထဲမှာ “ဒီမိုကရေစီကို လက်ခံကျင့်သုံးရင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊မ၊ အသားအရောင် ဘာတခုမှ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ အားလုံးဟာ တန်းတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မခွဲခြားမှပဲ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ နိုင်ငံကို ညီညီညွတ်ညွတ် ထူထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်မည့် နိုင်ငံတခုမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေဆီက စီးဆင်းဆင်းလာတဲ့ ဥပဒေသာ အဓိကဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘာသာကမှ ဥပဒေရဲ့ အပေါ်မှာ မရှိစေရတဲ့အတွက် ဟင်ဒူ၊ မူစလင်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘာဘာသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းရှိပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် ထားတဲ့ စေတနာမှန်ဖို့ပဲ အရေးကြီးကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။” လို.ပြောထားတယ်နော်။
ဘယ်ဘာသာကမှ ဥပဒေရဲ.အပေါ်မှာမရှိစေရ ဆိုတာ မူဆလင်တွေအပေါ်မှာတော. သေချာလို.လားမငယ်နိုင်။
မြန်မာပြည်လို ဗုဒဘာသာထွန်းကားတဲ.နိုင်ငံမှာ မူဆလင်တွေကို ထိပ်တန်းနေရာတနေရာပေးလိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ်.နောက်ဆက်တွဲတွေက စိုးရိမ်ဖို.တော.ကောင်းတယ်။
ပြီးတော. ဗုဒဘာသာဝင်တယောက်ရဲ.အတွေးနဲ.မူဆလင်တွေအများစုတွေရဲ.အတွေးဟာ အတော်များများမှာ ပြောင်းပြန်လောက်နီးပါး ကွဲလွဲနေတတ်ပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ..ဒါတွေက ယေဘူယျခြုံပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဗုဒဘာသာဝင်တယောက်၊ မူဆလင်တွေကို ကိုယ်.တိုင်းပြည်အရေးမှာ မတွင်ကျယ်စေလိုတဲ. ပုဂိုလ်ရေးသဘောနဲ.ပြောတာမျိုးတွေပါ။
တခြားနောက်ထပ်တော. နိုင်ငံရေးနဲ.ပတ်သက်ပြီး ထပ်မဆွေးနွေး၊ ထပ်ကော်မန်.မပေးတော.ဘူးနော်။
September 30, 2010 at 11:30 AM Reply
(I beileve in the lady because she is working for the Good Side of Burma and meeting the Prime Minster of U.K and doing many campaings, and you are working onachair going on people's blog and assaulting them.)
မြန်မာတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားကို ကြက်တူရွေးလို ပြောနေကြတယ်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာကို လေးစားပါဆိုပြီး သေချာမစဉ်းစားပဲ ပြောနေတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ယဉ်ကျေးတဲ့ ဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လိမ်ညာပြောရင် တကယ်ငြိမ်ချမ်းမှာလား? ယုတ်ညံ့တာကို ယုတ်ညံ့တယ်လို့ အမှန်အတိုင်း ပြောတဲ့သူက အပြစ်လား?
အဖေဖြစ်သူက ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး လိမ်တယ်။ သမီးကလဲ အဖေဟာ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ကူပြီးလိမ်ပေးတယ်။ လူလိမ်တစ်ယောက်က မိန့်ခွန်းတက်ပြောတာနဲ့ သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ ယူဆလို့ရသလား? ကောက်ကျစ်သူလို့ မမြင်ထိုက်ဘူးလား?
နောက်ပြီး မင်းကို ငါမေးထားတာ မဖြေသေးဘူး။ ကုလားကို ထိမှမင်းဟာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်နေတယ်။ ကုလားတွေ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ လိမ်ညာတုံးက ဘာလုပ်လဲမေးတာ အခုထက်ထိမဖြေသေးပါ။ ဘာလဲ? အမှန်အတိုင်းဖြေရင် စကားရှုံးမှာ စိုးလို့လား?
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမေးခွန်းလေး ၃ ခုကိုဖြေပေးပါ။ အဲဒါလေးတွေ ဖြေပြီးမှ ခင်ဗျားပြောချင်တာ ဆက်ပြောပါ။
☀ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ငြိမ်ချမ်းတဲ့ ဘာသာလို့ လိမ်ညာပြောမှ ငြိမ်းချမ်းမှာလား? ယုတ်ညံ့တာကို ယုတ်ညံ့တယ်လို့ အမှန်အတိုင်း ပြောရင် ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူးလား?
☀ လူလိမ်တစ်ယောက်က မိန့်ခွန်းတက်ပြောတာနဲ့ သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ ယူဆနေတာ လက်တွေ့ကျသလား?
☀ ကုလားတွေ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ လိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျား တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လို ကူညီခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြပါ။
မွတ်ဆလင် ကုလားတွေကို အကြောက်လွန်သူများကို တိုက်နေတဲ့
September 30, 2010 at 11:38 AM Reply
အနိမ့်အမြင့်ဆိုတာ အမြဲရှိတယ်။ အခုမွတ်ဆလင်တွေ နိမ့်နေပြီ။ တကမ္ဘာလုံးက မွတ်ဆလင်ကို လုံးဝ မကြည်ဖြူတော့ဘူး။ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်အောင် ကံတရားက ဖန်တီးနေတယ်။ ငါ့ကို အဆင်ပြေတဲ့ ကျောင်းလေးရအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်လဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ အလုပ်ထုတ်ခံရလဲ မပူဘူး။ ငါ့မိဘဆီမှာ လက်ဖြန့်တောင်းမှာ =P ။ မွတ်ဆလင်ကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ဆက်ပြီးအမြစ်ဖြုတ်မယ်။ အမိမြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ ပျောက်ကွယ်ရမည်။
မြင့်မြတ်သည့်မြန်မာ့ မြေပေါ်မှာ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ
September 30, 2010 at 12:20 PM Reply
ဪ.. ဇော်မျိုး၊ မင်းကဒီလိုပြောတော့လဲ ((မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်အောင် ကံတရားက ဖန်တီးနေတယ်။ ငါ့ကို အဆင်ပြေတဲ့ ကျောင်းလေးရအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်လဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။)) မင့်ဘဝကို နဲနဲနားလည်ရတာပေါ့ကွာ။ ဒါနဲ့ မင့်မှာ မွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်တွေလို လုပ်ရဲခံရဲသေရဲတဲ့ ရဲမာန်စိတ်လေးများရှိခဲ့ရင် သူတို့လုပ်သလိုပဲ မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်သမားတယောက်ယောက်ကို အမိအရသွားဖမ်းပြီး မင်းနဲ့ဝါဒတူတဲ့ လူတွေရဲ့ခလယ်ခေါင်မှာ ဓားနဲ့လည်လှီးသတ်ပြနိုင်ရင်၊ မင့်လုပ်စားရတဲ့အလုပ်ကို ပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ခုတော့ နေရာတကာမှာ မွတ်ဆလင်၊ မွတ်ဆလင်နဲ့ တမွတ်ဆလင်ထဲ ထပ်နေတဲ့မင်းကို လူတကာက အမြင်ရှုပ်နေကြတာ အရှက်ကလေးများ မရနိုင်သေးဘူးလားကွာ?
September 30, 2010 at 12:21 PM Reply
Can't help laughing out loud looking at the serious responses by that so-called Masters' master supremacist.
He might be thinking Toee Nanda is an adult daring enough to debate with suchasuperb like him LOL :D.
While you were busy with Ronhinja issues, Toee Nanda might be busy with his school home work.
ဒါပေမဲ့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝန်ခံရမှာတော့ ဝန်ခံရမှာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယန်ဘာသာ နဲ့ ဟင်ဒူဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား မျိုးဆက်သစ်တွေထဲမှာ ဒီလိုဒီလို လောက်လောက်လားလား ထက်ထက်မြက်မြက် တယောက်တလေ ရှိလို့လား။ Congratulation to parents of that young lady. Good job asaparent. Bravo.
ငါက free thinker ဆိုတော့ ဒီကနေ ကျေညာလိုက်မယ်သိလား......မြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီးရေ.. ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလူသတ်နအဖ လက်က ကွင်းလုံးကျွတ် လွှတ်အောင် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ချက်ချင်းဝင်ပေးလိုက်မယ်။ ဘယ့်နှယ်လဲ။ စိန်ခေါ်ရဲလား။ Let’s start……Come on>>>>>>
Be strong …Buddhists,
Be strong …Christian,
Be Strong …Hindus
Be Strong …Others
September 30, 2010 at 12:33 PM Reply
မွတ်ဆလင်တွေ သတ္တိုရှိတယ်? ကုလားသတ္တိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ငပေါစကားမပြောနဲ့ ဟေ့ကောင်။ ကုလားတွေ ပိုက်ဆံယူပြီး အသေခံဗုံးခွဲတာ မသိဘူးလား? ငွေမက်ပြီး အသေခံတာ သတ္တိုတဲ့လား? မောင်နှမအချင်းချင်း ကုလားမတွေကို လိမ်ညာပြီး ဗုံးတပ်ပြီး ဗုံးခွဲခိုင်းတဲ့အဖြစ်တွေကို မသိဘူးလား? ဦးဏှောက်ကျက်မပြည့်တဲ့ ကုလားမတွေက သတ္တိုရှိတာတဲ့လား? အီရတ်ကို အမေရိကန် ၀င်သိမ်းပါတယ်။ အမေရိကန်လဲမြင်ရော ခွေးကုလားတွေ ထွက်ပြေးတာ တန်းနေတာပဲ။ ကုလားကို သတ္တိုရှိတယ်လို့ လိမ်ချင်ရင် ဒီမိုငတုံးတွေကို သွားပြော။ သူတို့က ကုလားပြောရင် အားလုံးယုံတဲ့ကောင်တွေကွ။ ၀ါးဟားဟား။
September 30, 2010 at 12:51 PM Reply
September 30, 2010 at 1:00 PM Reply
ဪ.. ဇော်မျိုးရာ.. မင့်မှာလဲ ငါရေးထားတဲ့စာကို သေချာစေ့ငုမှ မဖတ်တတ်သေးဘဲကိုး။ သတ္တိဆိုတာနဲ့ ငါရေးထားတဲ့ ((လုပ်ရဲခံရဲသေရဲတဲ့ ရဲမာန်စိတ်)) နဲ့အလွန်ကွားခြားတယ်ဆိုတာလဲ သတိထားအုံး။ နောက်တခုက မွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်တွေဟာ အလွန် Media savvy ဖြစ်ပြီး၊ ခုလို IT ခေတ်မှာ သူတို့အနေနဲ့ ရုပ်သံတွေ၊ အင်တာနက်ကွန်ယက်တွေ၊ Operations Manual တွေကို ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေနိုင်ကြတာနော်။ မင်းလို ဗမာဘာသာတခုထဲနဲ့ ဗမာဘလော့ဂ်လောကတခုထဲလောက်မှာတင် ချောက်ချီးချောက်ချက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းထက်အများကြီးအဆင့်မြင့်ကြတယ်၊ သူတို့ကိုပြန်လုပ်ချင်ရင် သူတို့လို ကမ္ဘာ့ပရိတ်သတ်အလယ်ရောက်အောင် ကြိုးစားလိုက်အုံးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ ဗမာဘလော့ဂ်လောက ကျဉ်းကျဉ်းလေးတခွင်မှာ မျက်စေ့ရှုပ်နေကြရတဲ့ဘဝက လွတ်ကြမှာ။
September 30, 2010 at 1:13 PM Reply
မင်းငါ့ကို သြ၀ါဒ မပေးပါနဲ့ကွာ။ အလုပ်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ချဲ့သွားရတယ်။ အခုဆို၇င် ဘယ်ကုလားက မွတ်ဆလင်လို့ ၀န်ခံပြီး စကားပြောရဲလဲ? မိုဟာမက်ကို ဘယ်ကောင်ကများ တမန်တော်ဆိုပြီး တလေးတစားပြောသေးလဲ? ဟဲဟဲ.. အောင်မြင်မှုတွေက အများကြီးပါကွာ။ အခုကိစ္စလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ သွေးဆူလာပြီ ။ :P ကြည့်ဦးပေါ့။ နအဖနဲ့ . . .ဒီမို ရန်ဖြစ်တဲ့ အစဉ်အလာရပ်တံ့ပြီး ။ မြန်မာအားလုံးညီညွတ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာစေမယ်။ မြန်မာတွေညီရင် တကမ္ဘာလုံးကို တုံသွားအောင်လုပ်မှာကွ။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာလဲ နေရောင်ပမာ ထွန်းတောက်လာတော့မှာ။ စောင့်ကြည့်နော်
September 30, 2010 at 1:33 PM Reply
အေးပေါ့ကွာ မင့်လို အနှမ်းရဲ့ နွေရူးအိပ်မက်ထဲမှာတော့ ငါကန့်လန့်မပါချင်ဘူးဟေ့။ ဒါပေမယ့် ငါ့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ ကိုယ့်အမြင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ မင်းရဲ့ချောက်ချီးချောက်ချက် မွတ်ဆလင်ကိစ္စတွေနဲ့ ဝင်လာမငြိစေနဲ့၊ ငြိလို့ကတော့ နာနာဆော်ပစ်ဖို့ ငါ့ဖက်ကဝန်မလေးဘူးလို့သာမှတ်ထားပေါ့ကွာ။ ဘိုင့်ဘိုင်။
September 30, 2010 at 9:46 PM Reply
မငယ်နိုင်ခင်ဗျား၊ မငယ်နိုင်ရဲ့ဘာသာပြန်ပို့စ်ကို အနည်းငယ်ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေကို ပြင်ဆင်ထားပြီး တခြားဆိုဒ်တွေမှာ မိုးမခ မှတင်ဆက်သည်ဆိုပြီး တင်ပြထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မငယ်နိုင်ရဲ့မူရင်းစာသားအများစုကိုလဲ တွေ့မြင်ရပါပေမယ့်၊ မငယ်နိုင်ကို ခရက်ဒစ်ပေးထားခြင်းမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဘွယ်ဖြစ်စေချင်လို့ ဒါကိုလာထောက်ပြနေတာမဟုတ်ပေမယ့်၊ စိတ်ထဲတော့ မငယ်နိုင်ကိုယ်စား စနိုးစနောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့တာကလဲ ဗမာဘလော့ဂ်လောကမှာ လူတိုင်းသိနေတဲ့ ပုံပြင်ဟောင်းကြီးတပုဒ်ပါ။ ဘာလို့များ မူရင်းအားထုတ်သူကို နာမည်လေးရည်ညွှန်းပေးဖို့ ဝန်လေးနေကြလဲနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ အသားပဲ့ပါသွားတာလဲမဟုတ်၊ ငွေပေးရတာလဲမဟုတ်၊ ဘာဂုဏ်သိက္ခာကြီးတွေများ ပဲ့ပါသွားတယ်ထင်နေကြလဲ မသိနိုင်ပါ။ ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကို စောင့်စည်းသင့်တယ်လို့တော့ မြင်ပါတယ်။ ခုတော့ ဟင်း.. လို့ပဲ သက်ပြင်းရှည်တချက်ချရုံပါပဲ။
October 1, 2010 at 12:09 AM Reply
ကိုပြည်သူ ဘလော့ဂါမောင်လေးတယောက် တင်ထားတာ တွေ့လို့ ကျွန်မသွားကြည့်ပြီး မှားနေတာကို ပြန်ပြင်လို့ ရအောင် အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပြီး မေးလ်နဲ့ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြန်ဖေါ်ပြတာကတော့ မိုးမခကလည်း Forward မေးလ်က ရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကို Credit ပေးရမှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုတော့ နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း Face book က ကလေးတွေ မြန်မာလို သိချင်တယ်ဆိုလို့သာ ပြန်လိုက်ပါတယ် စနစ်တကျ လေးလေးနက်နက် ထားပြီး ပြန်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာသားကို အရင် ရိုက်ပြီးမှ စာစာချင်း ပြန်တာမဟုတ်ဘဲ ဒီလိုပဲ ဗွီဒယိုမှာ ပြောနေတာကို Pause လုပ်ထားလိုက် ဘလော့ဂ် edit မှာ မြန်မာလိုကို တိုက်ရိုက် ရိုက်ထည့်ပြီး Pubblish လုပ်လိုက်နဲ့ ပြန်လိုက်တော့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြီးစလွယ် ဘာသာပြန်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါလည်း နောက်ဆို သင်ခန်းစရာ ယူစရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကိုပြည်သူ လာထောက်ပြတာနဲ့ ကျွန်မဆီမှာတော့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ၊ အဲဒီအတွက် ကိုပြည်သူကို ကျွန်မ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခြား ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့နေရာတွေမှာ ဆက်မှားနေမှာစိုးလို့ မိုးမခကိုလည်း အဲဒီဘလော့ဂ်မောင်လေးကတဆင့် ကျွန်မမူရင်းမှာ နားကြားလွဲပြီး မှားတာရော စကားထောက်နေတာပါ ရှိတာကိုပါ ပြင်ပေးစေချင်ကြောင်း အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးပါပြီ။ ပြန်ဖေါ်ပြတော့ အများဖတ်ရတော့ ကောင်းပါတယ်။ Credit မလုပ်တာက ဘယ်သူ ဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိလို့ မလုပ်တာ ကိုပြည်သူလည်း ဘာမှ သဘောမထားပါနဲ့။
တခြား အကြောင်းပြန်သင့်တဲ့ မှတ်ချက်တချို့ ရှိနေတာတွေ့ပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီနေ့ တနေကုန် ခရီးသွားထားလို့ အချိန်မရတော့တဲ့အတွက် မနက်ဖြန်မှပဲ အကြောင်းပြန်တော့မယ်။ ဇော်မျိုးကလွဲရင် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို ရေရှည်ထားမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျပ်မပြည့်သူနဲ့ အဖက်လုပ်ပြီး အကြောင်းမပြန်ကြပါနဲ့လို့ ကျွန်မ ထပ်ဆင့်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
October 1, 2010 at 2:46 AM Reply
အစ်မ ဘာသာပြန်ထားမှန်းလုံးဝ မသိလိုက်ဖူး
အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကျနော်ပြင်လိုက်တယ် အစ်မ..
အချိန်ပေးပြီး အခုလို့ ဘာသာပြန်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဗီဒီယို ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး စာကို ဖတ်ရတာ
ပြည်ပကနေ တကယ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ......
October 1, 2010 at 3:05 AM Reply
ဘယ်ရောက်သွားလဲ? ပြန်မဖြေသေးပါလား။ မေးခွန်း ၃ ခုလေးကို ဖြေဖို့ခက်နေလို့လား? ဒါမှ မဟုတ်ရင် ကျုပ်မေးတာက မရှင်းလို့လား? အဲဒါဆိုရင် စာကြောင်းကို ပြင်ရေးပြီး နားလည်အောင် လုပ်ကြည့်မယ်နော်..
☀ Quran ကျမ်းမှာ ဘာသာမတူတဲ့သူဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားလိုလူကို သတ်ဖို့၊ ခင်ဗျား အမေ၊ ညီမတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီတိုက်တွန်းချက်တွေကို မေ့ထားပြီး မွတ်ဆလင်က ကောင်းအောင် သင်ပေးတယ်လို့ မိမိကိုယ်ကိုလိမ်ညာရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား?
☀ မိုဟာမက်ဆိုတာ ကြာကူလီ မုဒိမ်းကောင် လူသတ်သမားပါ။ သူ့ချွေးမကိုတောင် ပြန်ပြီး ကြာခိုတဲ့သူပါ။ အဲလိုအလုပ်မျိုး လူမပြောနဲ့ ချေးစားတဲ့ခွေးတောင် မလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိုဟာမက်ကို သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာပြောမှ ငြိမ်းရေးရမှာလား?
☀ ကုလားတွေကို ဝေဖန်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ သူတွေက အများကြီးပါ။ ခင်ဗျားလဲပါတယ်။ ကုလားတွေကို ထိရင်နာတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ကုလားတွေက ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေအပေါ် မတရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ( ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ၊ မိန်းခလေးတွေကို ငွေပေး ဖျက်ဆီးခြင်း) ခင်ဗျား အခုလိုပဲ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်ခဲ့သလား? ဖြေပေးပါ။
October 1, 2010 at 3:14 AM Reply
October 1, 2010 at 4:18 AM Reply
ဆရာဇော်မျိုး ဆိုတော့လည်း ဆရာဇော်မျိုး ပေါ့ဗျာ
မွတ်စလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေ က အစွန်းရောက်တာတော့ HRM အနေနဲ့ လက်ခံတယ်။ မိတ်ဆွေမကြိုက်သလို HRM လည်း မကြိုက်ပါဖူး။
အဲ့လို ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ သာသာက လူတစ်ယောက် ထူးချွန်တာကို ဒီအတိုင်း နေရာမပေးပဲ ထားရင် ကျနော်တို့ ဒီတသက် မဟုတ်ဖူး နောက်တသက်လည်း ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ရမှာ မဟုတ်ဖူး
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အတူ အသက်ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ ဦးရာဇတ်လည်းပါတယ်လေဗျာ...
ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဦးရာဇတ်ဟာ မွတ်စလင်မို့ နေရာမပေးပဲ မထားခဲ့ဖူး ...
တော်တဲ့သူကို တော်သလို နေရာပေးခဲ့တယ်။
လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေရင် ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖူး.....
October 1, 2010 at 6:02 AM Reply
စကားဝင်ပြောချင်ရင် အထက်က ဆွေးနွေးထားတာတွေကို အရင်ဖတ်သင့်တယ်။ ခင်ဗျားက ပြောတဲ့စကားကို Toee Nanda ပြောပြီးပါပြီ။ ကျုပ် အစအဆုံးပြန်ရှင်းရင် ကော်မန့်တွေ ပလူပျံသလို ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အကြမ်းဖျင်းပဲပြန်ရှင်းတော့မယ်။ အသေးစိပ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကမှာဆွေးနွေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်လိုက်နော်။
☀ ကုလားမ အဖေဟာ လူလိမ်။ ကုလားမလည်း လူလိမ်ဆိုတာ အထက်မှာ သက်သေပြထားပါတယ်။ လူလိမ်ကို မြှောက်ပေးတာ မှန်ကန်လား စဉ်းစားပါ။ ခင်ဗျားတို့တွေက အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေ အကြောင်းဘာမှ မသိ.. နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်လဲမရှိလို့ သူ့ကို တော်တယ်လို့ ထင်နေတာပါ။ အဲဒီကိစ္စကို ရှင်းစေချင်ရင်ပြောပါ။ ရှင်းပေးမယ်။
☀ ဦးရာဇတ်နဲ့ ကိုထွေ ကုလား ၂ ကောင်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဦးရာဇတ်ဟာ မွတ်ဆလင်အတွက် မြန်မာ့အသံမှာ ကုလားအစီအစဉ်လုပ်ပေးခဲ့တာက အာဇာနည်ဖြစ်ထိုက်လား? အဲဒီကုလား ၂ကောင်မှာ အာဇာနည်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုရင် ပြောပြပါ။ မှတ်သားပါမယ်။
☀ ကုလားကို ထိတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်တယ်။ ကုလားတွေ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေအပေါ် မတရားလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အခုလို ဆတ်ဆတ်ထိ မခံဖြစ်ဘူးလား?
☀ ဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုပြီး မက်လုံးပေးရင် . . . တကမ္ဘာလုံးမှာ အဓိကရုံဏ်းတွေလုပ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ဘာသာလို့ လက်ခံမှာလား? မွတ်ဆလင်ဝါဒယုတ်ညံ့ပုံကို အမှန်အတိုင်း ပြောရင် ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို မကောင်းမြင်မှာပေါ့? ဖြေကြည့်ပါ။
October 1, 2010 at 7:49 AM Reply
(((((ဗုဒဘာသာထွန်းကားတဲ.နိုင်ငံမှာ မူဆလင်တွေကို ထိပ်တန်းနေရာတနေရာပေးလိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ်.နောက်ဆက်တွဲတွေက စိုးရိမ်ဖို.တော.ကောင်းတယ်။)))) ဆိုတာပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးထားတဲ့ Anonymous (30, 2010 8:57 AM ) ရဲ့ မှတ်ချက်တခုကိုပဲ ပြန်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ ဥပဒေကို အခုနအဖ ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲသလို လူတယောက် တစုတည်းက ပြုရတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ Anonymous သိမှာသေချာတယ်။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အများဆန္ဒနဲ့အညီ ပြုထားတဲ့ ဥပဒေအတိုင်းသာ အလုပ်လုပ်လို့ ရပါတယ်၊ ဥပဒေကို ကျော်လုပ်လို့ မရတဲ့အတွက် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး Anonymous။ လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖေါ်တယ်ဆိုတာ ဥပဒေ ပြုပြီးမှ ဖေါ်လို့ရပါတယ်။ အခုနအဖလို ဦးသန်းရွှေ ပါးစပ်က ထွက်တာကို ဥပဒေလို လိုက်လုပ်နေရသလိုမျိုး မဟုတ် အများဆန္ဒအတိုင်းသာ လုပ်ရတဲ့အတွက် မူစလင်တယောက် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သွားတာ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ မူစလင်တယောက်ယောက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး တခြားဘာသာဝင်တွေအတွက် မပြောနဲ့ သူ့ဘာဝင်အတွက် ဥပြဌာန်းချင်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဥပမာ မြန်မာပြည်က မူစလင်အမျိုးသမီးတွေ ခေါင်းမြှီးချုံရမယ်လို့ ဥပဒေထုတ်ချင်လို့ အဆိုတင်သွင်းလာတယ်ပဲ ထားလိုက်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေ လက်မခံရင် အဲဒီ အဆိုတင်သွင်းမှုကို ဥပဒေအဖြစ် အတည်ပြုလို့မရဘူး။ ဒါ စိတ်ကူးနဲ့ ပေးတဲ့ ဥပမာပါ၊
စိတ်ကူးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ ကြုံဖူးတဲ့ မူစလင်တွေနဲ့ အနည်းငယ် ဥပမာထပ်ပေးချင်တယ်။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ မြို့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်က မူစလင်ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ၀ါဆိုလပြည့် ၀ါဆိုသင်္ဃန်းကပ်တာတို့၊ အာစရိယပူဇော်ပွဲ လုပ်တာတို့ မြို့က နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားပွဲတို့အတွက် ကျောင်းသားတွေ ပါဝင်ကူညီတာတို့ကို အမြဲတမ်း လုပ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ သူ့ဘာသာမဟုတ်လို့ လက်အုပ်ချီပြီး မရှိခိုးတာ တခုပါပဲ အဲဒီအခမ်းအနားတွေအတွက် ကျောင်းသားတွေကို တခြားလုပ်စရာ ရှိနေတဲ့ကြားက ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးတယ်၊ သူကိုယ်တိုင် အခမ်းအနားမှာ ကျောင်းအုပ်ရဲ့ တာဝန်အတိုင်း မိန့်ခွန်းပြောရတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဒါမူစလင်ဘာသာဝင် ကျောင်းအုပ်က ဦးဆောင်တဲ့ကျောင်းပါ။
October 1, 2010 at 7:50 AM Reply
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ၈၈ နောက်ပိုင်း တောထဲရောက်တော့ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဗဟိုနဲ့ တပ်ရင်းအသီးသီးမှာ မူစလင်ဘာသာဝင်တွေ များစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဘောင်အတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တပ်ရင်း (၂၀၁) မှာဆို မူစလင် တပ်မှူးတွေ တော်တော်ကို များတယ်။ ရှေ့တန်း လှုပ်ရှားမှုမှာ တာဝန်အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ တပ်ခွဲမှူးဆို နှစ်ယောက်တောင် ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ တပ်ကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူနဲ့ဘဲ ဦးဆောင်တယ်။ ဘာသာရေးအရ ဦးမဆောင်ဘူး။ တပ်မှာ ရဲဘော်တွေ ၀က်သားစားချင်ရင် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတယ်။ ရှေ့တန်းမှာ ရဲဘော်တွေထဲက မင်္ဂလာဆောင်တာတို့ ဘာတို့အတွက် ၀က်သားကျွေးချင်ရင် စီစဉ်ပေးတယ်။ တပ်မှူးက မူစလင်ဖြစ်လို့ မူစလင် ဘာသာဝင် ရဲဘော်တွေကို တခြားရဲဘော်တွေထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေးပေးတာမျိုးလည်း တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ သူတို့ဟာ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး၊ တပ်ကို စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရှေ့တန်းမှာ လူထုနဲ့ ဆက်ဆံရေး ဘာမှာ ဘာမှကို ပြောစရာ မရှိပါဘူ။ ကျွန်မအခု ဆွေးနွေးလိုက်တာက မူစလင်တွေဆိုပြီး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍမှာ သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရဘူး လုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ဖူးတာကို ဥပမာပေးပြီး ပြောပြတာပါ။
Anonymous အပါအ၀င် အများစု စိုးရိမ်နေတာ အစွန်းရောက်တဲ့ မူစလင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်တဲ့ မူစလင်တွေကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့၊ ယဉ်ကျေးအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ခေါင်းဆောင်တွေအထဲမှာ ကောင်းတဲ့မူစလင်တွေ ရှိဖို့ တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တခုထူထောင်ချင်ရင် မူစလင်မှ မဟုတ်ဘူး ဘယ်ဘာသာကိုမှ ခွဲခြားဆက်ဆံလို့ မရဘူး၊ အမှန်တကယ် အရည်ချင်းရှိပြီး သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ တော်တဲ့သူကို ထိုက်သင့်တဲ့ နေရာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
October 1, 2010 at 9:17 AM Reply
လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ခွဲခြားဆက်ဆံရေးက ခေတ်အဆက်ဆက် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကျင့်စဉ်ပါ။
အခုကိစ္စမှာ ကိုမြအေးတို့ ဇနီးမောင်နှံရော သူ့သမီးလေးပါ မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့ယုံတင်မက၊ သူတို့ရဲ့ နှစ်ဖက်အဖိုးအဖွားတွေပါ မြန်မာပြည်မှာ မွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်က
ဘာလဲ။ ???? မြန်မာပြည်ကလွဲပြီးဘာဖြစ်ရဦးမှာလဲ။
လူမျိုးက ကုလားဆိုတော့ အများစုကမကြိုက်ကြဘူးပေါ့။
ဟုတ်ပါပြီ၊ ကုလားမိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတော့လဲ ကုလားပေါ့။ ကုလားဖြစ်တော့လဲ တရုတ် ကုလား တိုင်းရင်းသားကို နှိမ်ထားကြဆိုတဲ့ ကျင့်စဉ်ထဲ ဝင်သွားတာပေါ့။
တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားတဲ့စိတ် အပြည့်ရှိတဲ့ တရုတ်ကုလားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ နှိမ်ချစော်ကား နေကြတာဟာ လမ်းမှန်ကမ်းမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
ဘာသာရေးမှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာက မြင့်မြတ်တယ် ဆိုတာ အော်ပြောနေယုံနဲ့ မပြီးသလို၊ သူများဘာသာ တွေကို လိုက်လံ စော်ကားနေလို့လဲ ပြီးသွားမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားမပြောကြကြေးဗျာ။
ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာကို ပက်ပက်စက်စက် စော်ကား သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲပြီး အညွန့်တုံးအောင် လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက
မြန်မာမို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မို့ မြန်မာပြည်အရေးမှာ
စွန့်လွှတ်စွန့်စားနေတဲ့ တရုတ်ကုလား တိုင်းရင်းသား
တွေထက် မြင့်မြတ်တယ်လို့ ပြောလို့ရရဲ့လား။
တရုတ်မို့ ကုလားမို့ မြန်မာပြည်ကို မချစ်ကြနဲ့ဟေ့လို့
ဘယ်သူမှတားလို့မရသလို၊ သူတို့ရဲ့ သတ္တိ၊ သိက္ခာ
လုပ်ရပ်၊ ကျင့်စဉ်တွေဟာ ဆက်ပြီး မှတ်ကျောက်တင်
စကားတွေကို ကမ္ဘာ့ စင်မြင့်တနေရာကနေ သိက္ခာရှိရှိ
မင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်သမီး၊ ဆက်လုပ်ပါ။
ငါက free thinker ဆိုတော့ ဒီကနေ ကျေညာလိုက်မယ်သိလား......ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလူသတ်နအဖ တိုင်းပြည်မွဲပြာကျအောင်လုပ်တဲ့ အစိုးရ လက်က ကွင်းလုံးကျွတ် လွှတ်အောင် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ချက်ချင်းဝင်ပေးလိုက်မယ်။ ငါ့တရွာလုံးပါ ဝင်စေရမယ်။ ဘယ့်နှယ်လဲ။ စိန်ခေါ်ရဲလား။ Let’s start……Come on>>>>>>
Be strong …Christians,
Be Strong ...Muslims
October 1, 2010 at 11:55 AM Reply
Do you have eyes? I said "I do hate some bad kalars". (Read my last comment), If the Quran, says how to rape women then does that mean the whole nation is bad? I also haveaquestion, for you. Think about this:
Kalar Terriost don't like peace, use guns, wars, fights, no rights.
Burmese Terriost don't like peace, use guns, wars, fights, no rights and kill monks. Now earlier you said to me "are you going to beileve her just because good words are coming out of her mouth?". That was very idiotic to say, because if bad people usually lie (thats what you said) why didn't the Burmese
Military lie? Its either because they are plain stupid or they are good guys. And if the lady is lying then thats too sad isn't it :( to prove the lady isn't lying, she is doing this for her dad, and if she betrays her dad in doing this, that would be selfish but I guess we are even, but your much more worse. Also, if you hate bad kalars, why is the Burmese Military doing the same thing as them? If you look carefully out our arguments you will also realise im winning, your just saying stuff that is bad to other people what don't you look at your self? Unlike me, I say both sides. Adding to that you haven't answered some of my questions or commented stuff like "I like:
And yet you are saying I made Buddha feel negative. Nice brain you got there."
and what about this, "First of all, you don't beileve in Aung San Su Kyi, and yet your both Buddhist. But Aung San Su Kyi is more Buddhist and have more similarities of Buddha than you, in fact im not even sure if your human." About Rohiangers, back then the world was unstable no democracy no rules, but now this world is stable, (apart from Burma and your self of course). About Mohammad, he might beabad kalar, which he is not. But if he is, okay I understand that because I do hate bad kalars.
October 1, 2010 at 1:31 PM Reply
Do you have eyes? I said "I do hate some bad kalars". (Read my last comment), If the Quran, says how to rape women then does that mean the whole nation is bad?
မင်းအမေကို မုဒိမ်းကျင့်ရင် ကုသိုလ်ရတယ်လို့ သူတို့ဘာသာက သင်ထားပါတယ်။ သူတို့ ဘာသာ သင်ကြားချက်အတိုင်း မင်းအမေကို မုဒိမ်းကျင့်ရင် ကုလားဆိုးလို့ သဘောထားသလား? ခက်ပါ့ကွာ။
Burmese Terriost don't like peace, use guns, wars, fights, no rights and kill monks.
ဗဟုသုတ တစက်မှမရှိတဲ့သူပဲ။ ကုလားတွေရဲ့ လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာ သတ်မှတ်ချက်က ငါတို့နဲ့ ဗြောင်းပြန်ကွ။အကြမ်းဖက်ကုလားတွေဟာ မွတ်ဆလင်သင်ကြားချက်နဲ့ အညီ လုပ်နေတာ။ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အမြင်မှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ လူဆိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတော်ကောင်းတွေကွ။
you said to me "are you going to beileve her just because good words are coming out of her mouth?". That was very idiotic to say, because if bad people usually lie (thats what you said) why didn't the Burmese
စာကို သေခြာဖတ်ပါ။ သူ့အဖဟာ ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး တနိုင်ငံလုံးကို လိမ်ညာထားတဲ့ ကုလားလိမ်တစ်ကောင်ပါ။ သူကလဲ သူ့အဖေဟာ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ဆက်ညာနေသူပါ။ အဲလိုကုလားမ တစ်ကောင်ကို ယုံကြည်နေတဲ့ မင်းဟာ ချေးကျွေးရင်စားမယ့်ကောင်ပါ။
If you look carefully out our arguments you will also realise im winning,
ကိုယ့်ဖာသာ ဒိုင်လူကြီးလုပ်နေတယ်။ ခက်ပါ့
မင်းဟာ မျက်ကန်းဒီမိုပဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေကလဲ ကွန်မြူနစ်ဟာ အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘယ်စံနစ်ကများ စစ်လိုချင်တယ်ပြောလို့လဲ? ခက်တာက နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အပြောက တမျိုးအလုပ်က တမျိုးလေကွာ။ ဒီမိုအစိုးရတွေဟာ ဖက်ဆစ်ထက်တောင် လူပိုသတ်တယ် မဟုတ်လား?
About Rohiangers, back then the world was unstable no democracy no rules, but now this world is stable, (apart from Burma and your self of course).
မင်းက ကုလားတွေကို ထိတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံနာတာပဲသိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ မြန်မာပြည်က ကုလားတွေ ဘယ်လို ကူပြီးလိမ်ညာခဲ့လဲဆိုတာ မသိပဲကိုး။ ၀ါးဟားဟား ။ နည်းနည်းပါးပါး လေ့လာသင့်တယ်။ (မသိဟန်ဆောင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
About Mohammad, he might beabad kalar, which he is not. But if he is, okay I understand that because I do hate bad kalars.
မုဒိမ်းကောင် ၊ ကြာကူလီ၊ လူသတ်တဲ့ကောင်ကို လူဆိုးလို့သဘောမထားရင်. . .ဆေးသောက်ပါ။ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီ လူသတ်တဲ့ ကောင်ကို သူတော်ကောင်းလို့ သဘောထားနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ တန်းတူထားရင် ဆီးယိုအများကြီးစားပြီး ရေအေးအေးကို အ၀သောက်ပါ။
ကျွန်ကုလားများ ကိုးကွယ်သောမိုဟာမက်ကို ချေးစားခွေးထက်ပိုပြီး ရွံနေသည့်
October 1, 2010 at 1:36 PM Reply
စကားဝင်ပြောချင်ရင် အထက်က ဆွေးနွေးထားတာတွေကို အရင်ဖတ်သင့်တယ်။ တရုတ်တွေကို ဆန့်ကျင်တာလုံးဝမရှိပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေကို ဆန့်ကျင်တာလဲ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားက ပြောတဲ့စကားကို Toee Nanda ပြောပြီးပါပြီ။ ကျုပ် အစအဆုံးပြန်ရှင်းရင် ကော်မန့်တွေ ပလူပျံသလို ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အကြမ်းဖျင်းပဲပြန်ရှင်းတော့မယ်။ အသေးစိပ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကမှာဆွေးနွေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်လိုက်နော်။
ကျွန်ကုလားများ ကိုးကွယ်သောမိုဟာမက်ကို ချေးစားခွေးထက်ပင် ရွံနေသည့်
October 1, 2010 at 3:04 PM Reply
မဟာသခင်ကိုဇော်မျိုးရဲ.ရဲစိတ်ရဲမာန် ,ရဲစွမ်းသတ္တိ ဉာဏ်ပညာအတွေးအခေါ်စူးရှထက်မြက်မူ.န.ဲမျိုးချစ်စိတ် ကြီးမားမူ.တို,အတွက်ချစ်ခင်လေးစားကြည်ညိုစွာဖြင်.ဂါဝရပြုပါတယ်သခင်ကို ဇော်မျိုး.........ရွေဂျူး(သခင်မျိုးမဟာမြန်မာ)
October 1, 2010 at 6:40 PM Reply
အမြင်ကို ကပ်လာပြီ သခင်မျိုးလား
ကျွန်မျိုးလားဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာတွေကျွန်လုပ်နေတာလာကြည့်စေ
ချင်တယ်။ သခင်မျိုးဆို အဲ့လို ကျွန်မျိုး ဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာဟာ
တယောက်ကို စဉ် ပေါ်တက်ပြောခိုင်းကွယ်
ဒီလို ဒီလိုတွေ ကြောင့် မြန်မာတွေ နောက်ကျ
နေတာဘယ်နေရာမှာ တိုးလို့ ရလို့ လဲ
စဉ်စားပါ ကြာလေ အမြင်ကပ်လာပြီ
တမြင် အချိန်တွေ ဖြုန်းနေတာ မြန်မာလူမျိုး
ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုတာ မေတ္တာတရားနဲ့ ဖွဲ့ 
စည်းထားတာပါ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ့စိတ်ဓါတ်တွေ
ဒီလောက်ပဲ ယုတ်ညံ့တယ်လို့ဖော်ပြနေတာဟာ
နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ အဲ့နိုင်ငံမှာ မွေးလာတဲ့
မြန်မာ့ကလေးတွေကို အဲ့နိုင်ငံသားတွေက အဲ့လိုပြောရင်
ဘယ်လို ခံစားရမလဲ သူ့ နေရာက၀င်ခံစားကြည့်ပါ
ထားပါ ကုလားတွေက ယုတ်မာတယ် ရိုင်းတယ်
ဆိုရင် ဘာလို့သူတို့ နဲ့အပြိုင် ကျဲနေရတာလဲ
ကိုယ်ကောင်းဖို့ လိုတယ်လေ အခုတော့
အဲံဒီရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကုလားတွေ နဲ့ ဘာကွာနေပြီလဲ
စဉ်းစားပါ တခြားလူမျိုးတွေ အမြင်မှာ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက ဒီလိုမျိုးလို့ ပြောရလောက်အောင်
ကို ဖန်တီးနေကြတာ စာတွေ ဖတ်ရသလောက် ခလေး
တယောက်မှ မပါဘူးထင်ရတယ် လူကြီးဖြစ်ပြီး
လူကောင်းဖြစ်နိုင်အောင်ကျိုးစားသင့်တယ် မြန်မာတင့်တယ်အောင် ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုလေးစား
ကုလားမ မွတ်ဆလင်မ ဝေနှင်းသုန်က သူ့နိုင်ငံအဖြူကောင်နိုင်ငံအကြောင်းကို မဝေဖန်ပဲ သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ မြန်မာနိင်ငံကို နကန်းတစ်လုံးမှမသိပဲ ဒီမိုငတုံးတွေပြောထားလိမ်ထားတဲ့ စာရွက်ထဲကဟာတွေကို အလွတ်ကျက်ပြီး ယုံနေတဲ့ ကုလားမတစ်ယောက်ပဲ...နေတော့ တိုင်းတစ်ပါးမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်ကို ခြေမချဖူးတော့တာ ကြာညောင်းနေပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေနေတွေကို နကန်းတစ်လုံးမှမသိပဲ အဖအဖြူကောင်တွေ အလိုအကျ တိုင်းပြည်ကိုအပုပ်ချစော်ကား ပြည်သူတွေငတ်အောင် စီးပွားရေးပိတ်ဖို့တောင် တောင်းဆိုလိုက်သေးတယ် ပါးပိတ်ရိုက်ပစ်ဖို့ကောင်းတယ်...နိုင်ငံရေးအကြောင်း နိုင်ငံအကြောင်း ပြည်သူတွေအကြောင်း လက်ရှိအခြေနေတွေကိုမသိရင် မသိသလိုနေ...တတ်သလိုလို နက်သလိုလုိုလာမလုပ်နဲ့....
သဘောက်ကျွန် ဆရာဇော်မျိုး တို့လိုလူတွေ တော်တော်များနေမယ်ဆိုရင်တော့ End of the world ဖြစ်တဲ့ထိ မြန်မာပြည်ကြီး မွဲနေဦး မှာပဲ။ အော် သဘွန်ကျောက် သဘောက်ကျွန် ။ စိတ်ဓာတ်လေးကဖြင့် တစက်မှ အဆင့်မရှိဘူး၊ သူ့ကိုယ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့။ မှတ်ပုံတင်ထဲ ဖြည့်ရုံသက်သက်နေမှာပေါ့ကွာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်တွေအစား ရင်လေးမိပါတယ် ။ btw, မင်းအဖေက မင်း..သိပ်…သိပ်..နာကျည်းနေတဲ့ bad muslin လား?????????? မင်းအဖေ ဆိုတာ မင်းရဲ့ biological father ကိုဆိုလိုနေတာနော် သိလား။ မင်းကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်း ရပြီး မွေးလာတာတဲ့တုံး။ သဘောက်ကျွန်ကြီး သိပ်နာကျည်းနေပုံထောက်တော့…. အဟင်းဟင်းဟင်း…..။ ကဲကဲ ဒါဆိုရင်လဲ စာဖတ် ပိတ်သက်ကြီးရေ နားလည်ပေးလိုက် ရအောင်စို့လား။ သူ့ရဲ့အဖေဆိုတာကလေ သူတို့အပေါ် xxxxxxx တဲ့။ အို...သနားစရာ စိတ်ဒဇ ခလေးသူငယ်ပါ့လား။
October 2, 2010 at 5:35 AM Reply
( သဘောက်ကျွန် ဆရာဇော်မျိုး တို့လိုလူတွေ တော်တော်များနေမယ်ဆိုရင်တော့ End of the world ဖြစ်တဲ့ထိ မြန်မာပြည်ကြီး မွဲနေဦး မှာပဲ။ )
End of the world ဆိုတာ ဘာအဓိပါယ်လဲ.. နားမလည်ဘူးဗျ။ တောသားဗျ အင်္ဂလိပ်လို သိပါဘူးဆိုနေ။ ကျုပ်ကိုပြောရင် မြန်မာလို ဒါမှ မဟုတ် ပါလိလို ပြောပါ။ အေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကြီးချမ်းသာအောင် ကျုပ်လဲ စိတ်ထားကို ပြုပြင်ပါတော့မည်။
October 2, 2010 at 5:49 AM Reply
( နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ အဲ့နိုင်ငံမှာ မွေးလာတဲ့ မြန်မာ့ကလေးတွေကို အဲ့နိုင်ငံသားတွေက အဲ့လိုပြောရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ သူ့ နေရာက၀င်ခံစားကြည့်ပါ )
မြန်မာမိန်းခလေးနဲ့ ကုလားမကို နှိုင်းယှဉ်နေကတည်းက အသင်ဟာ လူသား မဟုတ် ကြက်တူရွေးဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ပါ။ ကုလားတွေက သူတို့ကို သူတို့ မြန်မာလူမျိုးလို့ မခံယူဘူး။ ကုလားလူမျိုးလို့လဲ မခံယူပါဘူး။ မွတ်ဆလင် လူမျိုးလို့ပဲ ခံယူပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ ၊ ကနေဒါ နိုင်ငံ ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ Allah က ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ မြေကို Allah ကပဲ ပိုင်တယ်။ မွတ်ဆလင် လူမျိုးတွေကပဲ အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ Allha ပိုင်တဲ့မြေကို တခြားဘာသာတွေ အုပ်ချုပ်နေတာကို ဆန့်ကျင်ရမယ်လို့ လက်ခံထားသူတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကုလားတွေကို လူလို တွေးပေးလို့မရပါ။ အို . . လူမဟုတ်တဲ့ အသင်ကြက်တူရွေး… အသင်သည် စာအုပ်ထူထူကြီးတွေ အဖတ်လွန်ပြီး ကျမ်းဆိပ်တက်နေသည်။ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ဆန့်ကျင်နေပြီ။ နောက်တခါ ဆက်ပြောလျှင် ကြက်တူရွေးကို အမွှေးမနှုတ်ပဲ (ကြက်တူရွေး အထီး၏ အမွှေးကို ရွံ၍ မနှုတ်ခြင်းဖြစ်၏) မီးကင်ပြီး .. ခွေးကျွေးပစ်မယ်နော်။ သတိထားပါ။
မြင့်မြတ်သည့်မြန်မာ့မြေမှာ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ
October 2, 2010 at 10:19 AM Reply
ဇော်မျိုး မှတ်ချက်တွေကို အကြောင်းမပြန်ကြပါနဲ့လို့ ကျွန်မ ထပ်ဆင့်ပြီး အသိပေးထားပါရစေ။ သူ့မှတ်ချက်ကို ကျွန်မဘလော့ဂ်က လက်မခံဘူး။ အခုဒီပို့စ်မှာ သူ့မှတ်ချက်ကို တွေ့နေရတာက တစုံတယောက်က ဒီပို့စ်မှာတော့ မဖျက်ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုထားလို့ မဖျက်ဘဲ ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုင်းတဲ့အသုံးအနှုံးပါတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုတော့ ဖျက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဖျက်ရင် အဲဒီဖျက်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို အကြောင်းပြန်ထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုပါ ဖျက်သင့်ရင် ဖျက်ရမှာမို့ အသိပေးတာ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ဟိုလူ့ဆဲလိုက် တိုက်ခိုက်လိုက် ဒီလူ့ဆဲလိုက် တိုက်ခိုက်လိုက်နဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဘာကိုမှ လက်မခံဘူး။ အပြန်အလှန် လေးစားပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆွေးနွေးရင် အားလုံးကို လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်မက လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင် စတာတွေမှာ မခွဲခြားတတ်ပေမဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆင့်အတန်းတော့ မိမိနဲ့ အဆင့်မတူရင် မပတ်သက်တတ်ဘူး သိပ်ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ပါးစပ်နဲ့ လာကိုက်ဖို့ ရန်ထောင်နေတဲ့ ခွေးကို ဘယ်လူတယောက်ကမှ ပါးစပ်နဲ့ ပြန်ကိုက်ဖို့ ကြိုးစားမှာမဟုတ်သလို မိမိနဲ့ အဆင့်အတန်း မတူတဲ့ နှုတ်ကြမ်း၊ အာကြမ်း၊ လျှာကြမ်း၊ ယုတ်ရိုင်းစွာ ပြောတတ်တဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ပြီး အဖက်မလုပ်တတ်ဘူး။ တခြား အရာတွေမှာ မခွဲခြားတတ်ပေမဲ့ ဒီတခုတော့ ကျွန်မ လုံးဝပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ မရိုင်းရင် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
October 3, 2010 at 6:23 AM Reply
ခွေးကို ကိုက်သူ ခွေးနဲ့တူ ကိုက်သူလဲခွေး ခွေးလဲခွေး။ ။ငယ်ငယ်ကရွတ်ဖူးတဲ့ စာချိုးလေးတစ်ခုခေါ်မလား။ ။
မကြားချင်ရင် နားပိတ်ထားလိုက်ကြပါ။ ။
မမြင်ချင်ရင်မျက်စိ မှိတ်ထား။ ။
တင်ပြတဲ့သူက စေတနာလေးတွေနဲ့ အချိန်တွေပေးပြီး
မျှဝေ တာ။ ။ လက်ခံချင်ရင် လက်ခံလို့က်
October 4, 2010 at 3:46 AM Reply
အားလုံးရပ်ကြပါ ကလေးတွေလို ရန်မဖြစ် ကြပါနဲ့ ကိုဇော်မျိုးရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို 75% ထောက်ခံတယ်
ဒါပေမယ့်အကို ရယ်သူများမိုးခါးရေ သောက်လဲကြိတ်မှိတ် သောက်လိုက်
ပါ ဒီကုလားမပြောတာတွေက မှန်လားမှားလား ဘယ်သူမှမသိဘူး သက်သေလည်းမရှိဘူး သူ့ အဖေကတော့ ထောင်မှာ ဆိုတာဟုတ်တယ် သူ့အမေကလည်းမဆိုးဘူး လင်ငယ်နဲ့ မယုံရင်သူ့အဖေ ကားဂိတ်ကဟာတွေမေးကြည့် တကယ်တော့ ကုလားမက သူ့ ကိုယ်သူပေါ်လွင် အောင်လုပ်ပြီး ငွေယူနေတာ။
သူ့စကားအချို့ ကိုတော့လက်ခံပါ တယ် ဘယ်နေရာမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ ဒါပေမယ့်ရွာတွေမီးရှို့ တယ်ဆိုတာ အလကားပါ ဘာသက်သေမှမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်ချင့်ချန် ပြီးယုံရန်။
မှတ်ချက်။ ။မိမိလုပ်မှ မိမိရမည် မည်သူမျှုလာမပေး လာမကျွေးပါ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများမစင်ကုံး မရှုပါနှင့်။
October 4, 2010 at 4:23 AM Reply
ဟဲဟဲ.. ကောင်းခန်းရောက်ပြီ။ အရင်အပတ်တုံးက ပါကစ္စတန်စစ်တပ်က ကုလား ၆ကောင်ကို မသေမချင်း ပြစ်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတခါလည်း ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကပဲ ပရိတ်သတ် မပျင်းအောင် နည်းသစ်လေးနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပလီဦးထုတ်ဆောင်းထားတဲ့ ကုလားတွေကို ဒုတ်နဲ့ မသေမချင်းရိုက်သတ် ပြပါတယ်။ အင်မတန်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော မြန်မာတွေ.. အခုလုပ်ရပ်မှာ ဘယ်လို နာကြမလဲ? ၀ါးဟားဟား ဖြေပေးကြပါ။ ကဲဗျာ.. အခုဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပါဦး။
October 4, 2010 at 12:12 PM Reply
တကယ်တော့ကိုယ့် ထမင်းကိုယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာစားရတာပါ ဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတယ့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါစေ ဘယ်သူမှထမင်းခေါ်မကျွေးဘူး
“အမှန်စင်စစ် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလျှင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံချစ်စိတ်ဖြင့် စည်းစည်း လုံးလုံး နေထိုင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုသည်မှာ ပေါ်ပေါက်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျ နေရသူများ ဟူ၍လည်း လုံးဝမရှိနိုင်ပါ။ နိုင်ငံတော်မှ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့် အတွက် အပြစ် ပေးခံရသူများသာ ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မည်။"
နအဖ ကိုမနှစ်သက်သူတွေ အတွက် သည်ကလေးမ စကားတွေစဟာ အလွန်နားထောင်ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမယ် ဒီကလေးမ စကားတွေကို ကြည့်ပါ တင်းကျပ်စွာစည်းပွားရေး ပိတ်စို့ရမယ်တယ့် ဒီစကားဟာ ဘာလဲ အဲဒါဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်အောက်ပို့နေတာပါ သူ့အနေနဲ့ ဆိုလည်း ထောင်ထဲမှာသူ့အဖေ ရှိတယ်လေ အဲတော့ နအဖကိုမကျေနပ်တာ မဆန်းပါဘူး
ကျွန်ကိုယ်တိုင်လည်း နအဖကိုယ် ကြိုက်လွန်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖ ဟာ လုံးဝ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရော ကောင်းသလား??
အများစုဟာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ရော၊ စည်းကမ်းရော၊ ပညာရော ဘယ်နေရာမှာ လူစဉ်မှီလည်း၊ တရုတ်ပြည်ဆိုရင် ကွန်မြူနစ်ပါ ဒါပေမယ့်လူတိုင်း ဒီမို လိုနေထိုင် ကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လူအများစုဟာ သူများကိုလွတ်လပ်စွာ ပြန်လှန်ချေပတာကိုပဲ ဒီမိုလို့ထင်နေတယ်
ဒီ blog မှာရှိတယ့် အကိုတွေ အမတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ချစ်တယ့်လူတွေဖြစ်တယ့် အလျှောက် ရှုထောင့်အမျိုးမျိူးက ထင်မြင်ချက် တွေပေးနေကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကောင်းနေ လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘေးနားက လူတွေကို အသိအမြင်တွေတိုးအောင်လုပ်ပါ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု မလုပ်ပါစေနဲ့။
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ထမင်းစားရပါမယ်။ နောက်ပြီး ဒီလို ကုလားမတစ်ယောက် နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ သဟဇာတ မဖြစ်နုိုင်ဘူး။
စစ်ခွေးတွေ မင်းအမေနဲ့ မင်းနှမကို လုပ်သတ်
ကုလားက ဘု၇ားမြေတဲ့ ဟေ့ကောင်
နင်ဖင်ဘူးထောင် ၇ှစ်ခိုးနေတဲ့ ဘု၇ားကလည်း
ကုလားနော် အဲ့ဒါကို တော့အပိုင်ယူထားတယ်
ငါတို့ ဘု၇ားဆိုပဲ ကုလားနိုင်ငံတွေမှာ
နင်တို့ ဗမာတွေ ကျွန်သွားခံနေ၇တယ်
ကုလား ဒီလောက်မုန်း၇င် ပေးလိုက်လေ အလုပ်
မပေးနိုင်ဖူးလား မြန်မာပြည်မှာနေပြီး ကိုယ့်လူမျိုး
စော်ကားတာ ခံနေ၇တာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က
ထမင်းမှနပ်မှန်အောင် မကျွေးနိူင်တာ သနားစ၇ာ
October 4, 2010 at 4:56 PM Reply
ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ ပြည်သူလူထု မဲမပေးဘဲနဲ့ ခေါင်းဆောင် တက်လုပ်လို့ မရတဲ့အတွက် ဝေနှင်းပွင့်သုန် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့် ခုချိန်မှာ ခေါင်းအပူခံပြီး တွေးနေစရာမလိုဘူး။ မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တဲ့သူက တနေ့တချိန် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့အချိန်မှာ သူနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာ လုပ်လို့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာရင် သူ့ပါတီကို မထောက်ခံရုံပဲ။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထောက်ခံတဲ့သူကလည်း ထောက်ခံလိုက်ရုံပါပဲ။ ဘာမှ ခက်တာမဟုတ်တာကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လိုက်ငြင်းနေစရာ မလိုဘူး။ အကုသိုလ်ည်း ပွါားနေစရာ မလိုဘူး။
မထောက်ခံရင်နေ တော်တဲ့သူကို တော်တယ်ဆိုတာတော့ လူမျို၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ ဘာမှ ခွဲခြားစရာမလိုဘဲ လက်ခံနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ မနာလိုဝန်တိုတဲ့ စိတ်ကိုလျှော့ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်မက ဘာသားရေးအစွန်းရောက်ဆိုလျင် မူစလင်မှမဟုတ်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါအ၀င် ဘာဘာသာဝင်မဆို အစွန်းရောက်တဲ့သူ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်တယ်။ အဲလိုအစွန်းရောက်သူ အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အစွန်းရောက်နေသ၍ ဒီမိုကေ၇စီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ဖေါ်ဆောင်လို့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ဒါကို နားလည်ထားဖုိ့ လိုပါတယ်။
Kelvin နဲ့ Anonymous တို့ကို ကျွန်မ သီးသန့် အကြောင်းမပြန်တော့ဘူး။ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ (October 1, 2010 7:49 AM) နဲ့ (October 1, 2010 7:50 AM) မှတ်ချက်နှစ်ခုမှာ ပါပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ဒီမှတ်ချက်နှစ်ခုကိုပဲ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ လာဆွေးနွေးနေတဲ့အထဲမှာ ကလေးတယောက်မှ မပါဘူးလို့ ပြောတဲ့သူလည်း ရှိတော့ ဒီမှတ်ချက်တွေပေးတဲ့အထဲမှာ ကလေးတယောက်ပါတယ်လို့ ကျွန်မ အသိပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူဆိုတာကတော့ အရေးအသားကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ရွှေတဂုံရင်ပြင်မှာ ဘုန်းကြီးကို ခေါင်းခွဲလိုက်ပြီး ညတွင်းချင်း ဘုန်းကြီးကို ကျောင်းထဲက ထုတ်ပြစ်လိုက်တာရော မမြင်ဖူးဘူးလား
အဲ့ဒါလည်း ဗမာတွေပဲလေ နင်မသိတာတော့
နင့်ကို ဒီလို လိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့တလကို ဒေါ်လာ ၂၇၅
ပေးထားတာနဲ့ ဒီလောက်တောင် မာန်တက်နေတယ်
ဟုတ်လား။ ကုလားမျိုးတုန်းအောင် လုပ်ပြစမ်းပါ
အောင်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုကြာလှပေါ့။ ဗမာတွေ
လုပ်ပြစ်တာ တခုတော့ သတိထားနော် နင်ပဲ မျိုး
တုန်းသွားနေအုံးမယ် နင်တို့လို ပြည်သူပိုက်ဆံနဲ့
ပြည်သူကိုသတ်ဖို့ပညာသင်နေတာထက် စာရင်တော့
ကုလားကကောင်းမှာပါ လူမျိုးတိုင်းမှာ မကောင်းတာ ရှိတယ် ငါတို့ က လူကို လူလိုပဲ မြင်တယ် ။
စာနာတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ် နင်ကသာ
အောက်တန်းကျတာ ကုလားတွေက နင့်ကို ဘာမှ
မပြောနေဘူး ။နင်သာ အရေမရ အဖတ်မရ
စစ်ကျွန်ဖြစ်နေတာ သေခြာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်
နင်ဘာမှရမှာ မဟုတ်ဘူးနော် ။ခင်ညွှန့် ကိုပဲ
နမူနာယူ နင်လည်း ဘ၀အဆက်ဆက် စံသွား
ရလိမ့်မယ် နအဖကို ပထွေးမတော်ချင်နေနဲ့
Non-Radical Muslim who loves Myanmar. says:
...ဘုရင့်တပ်ကမွတ်စလင်တွေ ခုခံကာကွယ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။
Non-Radical Muslim who loves Myanmar says:
October 5, 2010 at 2:56 PM Reply
ုမြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးပြသာနာများယခင်ကထက်လျော့နည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘာသာကောင်းသည်ငါ့ဘာသာကောင်းသည်ဟူ၍ပြိုင်ဆိုင်နေခြင်းများလည်းမရှိတော့ပါ။ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်ကျောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာလူအချင်းချင်းသင့်မြတ်ဖို့အတွက်ဘာသာလူမျိုးတူစရာမလိုပါဘူး။ဘာသာရေးဟာငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ပါပဲ။ အမေရိကန်တွေလိုတိုးတက်အောင်မြင်ချင်လို့ဆိုပြီးသူတို့လူများစုရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကျွန်တော်မကိုးကွယ်ပါ၊ ဆော်ဒီနိုင်ငံလူတိုင်းနီးပါးချမ်းသာနေသည့်အတွက်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကျွန်တော်မကိုးကွယ်ပါ။ ကျွန်တော်လက်ရှိအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါသည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်တော်၏ဘိုးဘွားများယုံယုံကြည်ကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသောမိရိုးဖလာဘာသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဘာသာမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူဆ၍မဟုတ်ပါ။ လူကောင်းရှိသလို၊လူဆိုးလည်းရှိပါသည်၊သူယုတ်မာရှိသလို၊သူတော်ကောင်းရှိပါသည်။ ဘာသာနှင့်မဆိုင်ပါ၊လူနှင့်သာဆိုင်ပါသည်။
Non-Radical Muslim who do loves Myanmar says:
October 5, 2010 at 3:48 PM Reply
''မဃဝမည်သော သိကြားမင်း ဝေပစိတ္တိအသုရိန်၏ ကြမ်းတမ်းသော စကားကို ကိုယ်တိုင် ကြားရပါလျက် ကြောက်သောကြောင့် သည်းခံသလော၊ ခွန်အားနည်း ခြင်းကြောင့် သည်းခံသလော'' ဟု ပြောဆို၏။
''အမောင်မာတလိ ငါသည် ဝေပစိတ္တိအသုရိန်အား ကြောက်ခြင်းကြောင့် သည်းခံ သည် မဟုတ်၊ ခွန်အားနည်းခြင်းကြောင့် သည်းခံသည် မဟုတ်။ ထိုစကား မှန်၏၊ အဘယ်သို့သော အကြောင်းကြောင့် ငါကဲ့သို့သော ပညာရှိသည် သူမိုက်နှင့်ဖက် ပြိုင်ရာအံ့နည်း'' ဟု ဤသို့ ပြောဆို၏။
''အမောင်မာတလိ အကြင်ပညာရှိသည် သူတစ်ပါး အမျက်ထွက်သည်ကို သိ၍ သတိနှင့် ပြည့်စုံလျက် ငြိမ်းအေး၏၊ ဤသို့ ငြိမ်းအေးခြင်းကိုသာလျှင် သူမိုက်အား တားမြစ်ခြင်းဟူ၍ ငါ မှတ်ယူ၏'' ဟု ပြောဆို၏။
October 5, 2010 at 5:58 PM Reply
Non-Radical Muslim who do loves Myanmar - မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိမိ သဘောထားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီခွေးလိုလို ကလေးလိုလို သတ္တ၀ါကို ဘာမှ တုံ့ပြန်ပြီး မရေးပါနဲ့။ သူ့မှတ်ချက်တွေက လူတကာကို ရန်စတဲ့ မှတ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်နေတတ်လို့ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ဒီဘလော့ဂ်မှာ လက်မခံပါဘူး။ ဒီပို့စ်တခုပဲ မောင်တိုးနန္ဒဆိုတဲ့ ကလေးက သူနဲ့ ပြောထားတာတွေ ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို ဒီပို့စ်မှာတော့ မဖျက်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံထားလို့ ရှိနေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ မဆိုင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ အနက် ရိုင်းရိုင်းရေးထားတာတွေ၊ ရန်စပြီး ရေးထားတာတွေကို ကျွန်မ အကုန်ဖျက်ပါတယ်။ စာကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မရေးရင် ဘယ်မှတ်ချက်ကိုမှ ကျွန်မ လက်မခံဘူး။ တယောက်မှ လာမရေးလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ရေးရင်တော့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရေးမှ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုတ်ရိုင်းတဲ့၊ စော်ကားတဲ့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့။
October 6, 2010 at 3:29 AM Reply
October 6, 2010 at 7:56 AM Reply
ဇော်မျိုး မှတ်ချက်တွေကို ဖေါ်ပြစေချင်ရင် ရိုင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ထည့်ပေးမယ်။ ဇော်မျိုး ဘော်ဒါ တိုးနန္ဒက ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို မဖျက်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံထားလို့ ထည့်ပေးဖို့ ရှိတယ်။ ရိုင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကိုပဲ ပြန်ပြင်ရေးလိုက်ပါ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ အကြိမ်တရာ လာထည့်လည်း အလကားပဲ ထည့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ တိုးနန္ဒကိုတော့ ပေးမပါတော့ဘူး နောက်ပတ် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေလို့ အလုပ်များနေတယ်။ တိုးနန္ဒကို ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း မေးထားလို့ သူက မေမေ ရိုဟင်ဂျာက ဘာလဲ အဲဒီအကြောင်း သိချင်တယ်ဆိုလို့ နင်နဲ့ မဆိုင်ဘူး နင်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် လေ့လာပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ABSDF မှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသန စာစောင်တခုကို ပြုစုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖြန့်ဝေဖို့ကို ရခိုင်စစ်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ABSDF တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေ ကန့်ကွက်လို့ မဖြန့်ဝေဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်သိမ်းထားလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မောင်တိုးနန္ဒကို မွေးဖို့နေနေသာသာ သူ့အဖေနဲ့ သူ့အမေနဲ့တောင် မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ဒီတော့ တိုးနန္ဒကို ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း သွားမေးနေလို့ အလကားပဲ။ တိုးနနန္ဒက သူသူငယ်တန်း ပထမတန်းတုန်းက မူစလင်ကလေးတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရဖူးလို့ ကုလားကို ကုလားတချို့မှာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုး ရှိတာကိုတော့ သူသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးပြီး အစွန်းမရောက်ရဘူး ဆိုတာလည်း သူနားလည်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းတွေမှာ အချင်းချင်း ခွဲခြားတာ အနိုင်ကျင့်တာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အလုပ်တွေကို သူက ဦးဆောင်တဲ့ ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ သူတို့ခေါ်တာ Anti-Bulling Programme အဲဒါ လူသားအချင်းချင်း ခွဲခြားပြီး ကိုယ်အရဖြစ်စေ၊ နှုတ်အရဖြစ်စေ၊ အတွေးအခေါ်အရ ဖြစ်စေ ချိုးနှိပ်ခြင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ Programme ဖြစ်တယ်။ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှု ဆိုတာ သူတို့အတွက် Zero Tolerant ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဇော်မျိုးကို အစွန်းရောက်လွန်းလို့ Zero Tolerant အရ သူ ၀င်ရေးတာ ဖြစ်တယ်။ ကဲ - မှတ်ချက်ထည့်ပေးစေချင်ရင် ရိုင်းတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို ပြင်လိုက်ပါနော့်။
October 6, 2010 at 9:11 AM Reply
စကားလှလှမပြောနိုင်ဘူး.. အမှန်တရားအတွက် ရိုင်းရိုင်းပဲပြောတတ်တယ်။ ဆဲတာမှ မဟုတ်တာ။ အစ်မလဲ ရိုင်းတာတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ အစ်မကျတော့ မပြင်ပဲ ကျုပ်ကို ပြင်ခိုင်းလို့..နားထောင်မယ်ထင်သလား? မပြင်နိုင်ဘူး. . . . . အစ်မ ဖျက်နှိုင်၇င် ဖျက်ပါ။ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာ ခိုက်ကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေ … စော်ကားတာကို ခေါင်းငုံ့ခံတဲ့အထဲမှာ တောသားမပါဘူး။ အညာသားကို လာပြီး သြ၀ါဒမပေးနဲ့။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး လူတွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ကနေ ဖြုတ်မယ်။ အစ်မသားကိုပြောလိုက်ပါ.. မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိအောင် အခုအချိန်ကတည်းက လေ့လာထားလို့။ Quran ကျမ်းလဲ ဖတ်ကြည့်လို့။ ကုလားမရဲ့ အဖေ မြအေးဆိုတဲ့ကောင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဟုတ်မဟုတ် လေ့လာထားပါလို့။
October 6, 2010 at 10:58 AM Reply
ကျွန်မ ဗုဓ္ဒဘာသာ စစ်စစ် ကိုယ့်ကို ရိုင်းရိုင်းလာပြောတဲ့ စကားဆို မယူတတ်လို့ လာပေးသူဆီ ပြန်ရောက်တယ်။ အဲဒါ ကျွန်မ စကားမဟုတ်ဘူး ဘုရားဟောခဲ့တာ။ ရှင်ဘာလာပြောပြော ကျမလက်မခံရင် ကျမမရဘူး။ ရှင်ပဲ ပြန်ရမှာ။
ဘလော့ဂ်မှာ Sexual ward မပါဘဲ။ သများကို Assault မဖြစ်စေဘဲ ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အမပြောခဲ့တယ်လေ ကိုယ့်ကိုက်တယ့် ခွေးကိုဘယ်တော့မှ ပါးစပ်နဲ့ပြန်မကိုက်ဘူးဆို? ဟုတ်ပါတယ် အမ မကိုက်သလို ဘယ်သူမှလည်း မကိုက်ဘူး။ နောက်ပြီး အမက စော်ကားရေးတာမျိုး လက်မခံဘူးဆို? ဒါပေမယ့် Anonymous ကိုကလေးလိုလို ခွေးလိုလို ဆိုပြီးရေးခဲ့နော်။ အဲဒါဟာ စော်ကားရာမရောက် ဘူးဘဲထားဦး အမဟာစကားလက်တစ်လုံးခြားပြော တတ်သလိုပဲ။ အမကိုယ်လေးစားခံခဲ့တယ့် ကျွန်တော်တောင် တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။
ဒါဟာ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေရဲ့ သင်ယူစရာ မလိုတယ့် အတတ်ပညာလား???
October 6, 2010 at 5:02 PM Reply
Kelvin ရေ ခွေးက ကိုက်ဖို့ ပြင်နေတာကို ပြန်ကိုက်ဖို့မလိုပေမယ့် အော်တာ ငေါက်တာ ချောက်တာ တန်ရာတန်ရာ လုပ်ရတာတော့ ရှိမှာပေါ့။ အဲလောက်ပြောတာကို နာရင်လည်း သူများကိုလည်း စော်ကားမော်ကား ပြောဖို့မလိုဘူး။ ကလေးလိုလို ခွေးလိုလိုက Anonymous ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ဇော်မျိုးကို ပြောတာ။ ဇော်မျိုးအတွက် Kelvin မပူနဲ့ သူ့အတွက် ဒါလောက်က အသေးအမွှားပဲ။ သူက သူ့ကိုဘာပဲ ပြောပြော နာတတ်သူ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ အဓိကက သူများကို စော်ကားမော်ကား ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း ပြောလို့ လူတွေဆီက Attention ရနေရင် ကျေနပ်နေတာပဲတွေ့တယ်။
ဇော်မျိုးရေ သဘောပဲနော့် အခုထည့်ပေးနေတာတောင် သားကတောင်းဆိုထားလို့ ထည့်ပေးနေတယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်။ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းပြီး လိုရင်းကနေ လမ်းလွဲအောင် သူများကို အလုပ်များအောင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင် တမင်လိုက်လုပ်နေတဲ့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ လက်မခံဘူးလို့ အပေါ်က Comment အတွက် မှတ်စုမှာ ရေးထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။
အောင်ကို သူ့ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောထားတာကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြန်ပြောထားတယ်။ Sexual reproductive system က စကားလုံးတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းမပြောရရင် စကားမပြောတတ်တော့တာ မိဘတွေ သင်ထားပေးတာတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ယဉ်ကျေးတဲ့ ဗမာတဲ့လား။ ဒီမှတ်ချက်ကို မထည့်ပေးနိုင်ဘူး။ ထည့်ပေးစေချင်ရင် စကားလုံးတွေ ပြင်ပြီး ပြန်ပြော ထည့်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား။
October 7, 2010 at 12:53 AM Reply
အင်းဟုတ်ပါတယ် sexually assault ဖြစ်တယ့်စာလုံးတွေ ကတော့ မြန်မာတွေ ပဲရှိတယ့် blog တစ်ခုမှာ လုံးဝမသင့်လျှော်ပါဘူး အလွန်ရုပ်ဆိုး ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုး ကျွန်တော်ဟာလည့်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေဆီ ရစေချင်ပါတယ် နအဖကိုလည်းမထောက်ခံဘူး၊ ကျွန်တော်က အတွင်းသိအဆင်းသိပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒေါ်စု ကိုမထောက်ခံ နိုင်ဘူး။ UN ဆိုပိုဆိုးသေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ 2007 February မှာ UN ကမြန်မာနိုင်ငံဟာ
၁။ ကြက်။ငှက်တုပ်ကွေး ဗဟိုဌာန
၂။ AIDS အဖြစ်အများဆုံး နိုင်ငံ
၃။ ဗိန်းဖြူအဆိုက်ဆုံးနိုင်ငံ ဆိုပြီး စွပ်စွဲခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်နဲ့ ရုရှားက ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွပ်စွဲတာလဲ??? ဒီလိုစွပ်စွဲခဲ့တာ ကို ဝေနှင်းပွင့်သုန်က ဘာကြောင့် နုတ်ဆိတ်နေခဲ့လဲ။ အခုကြတော့ သက်သေမရှိတယ့် ရွာဖျက်ဆီးတာ၊ မိန်းမတွေကို စော်ကားတာ၊ ကလေးတွေကိုတောင် သတ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ သူပြောတယ့် ထဲမှာ ၆၀% ကဲမှန်တယ်။ အကုန်လုံးမမှန်ဘူး။
October 7, 2010 at 8:57 AM Reply
Kelvin- ကျန်တာတွေကို တိတိကျကျ မသိပေမဲ့ ရွာမီးရှို့တာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပေါ်တာဆွဲပြီး မုဒိန်းကျင့်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါတွေဟာ ရှေ့တန်းဒေသက တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာရှိတဲ့ ရွာတွေမှာ သူပုန် အားပေးရွာတွေ ဆိုပြီး တကယ်ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တာ အဆွဲခံရတဲ့အထဲမှာ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေမှ မဟုတ်ဘူး ဗမာရွာတွေလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာရွာတွေမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေကို ပေါ်တာဆွဲခဲတယ်။ အမျိုးသားတွေကိုတော့ စစ်တပ်ရွာထဲ ၀င်တာနဲ့ တွေ့တဲ့အမျိုးသား ၀န်ထပ်မ်းမိသားစုနဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကလွဲရင် အကုန်ဆွဲတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်ရွာထဲဝင်ရင် အဲဒီလို ပေါ်တာအဆွဲ မခံရတဲ့သူတွေကလွဲရင် တရွာလုံးမှာ ရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတွေဟာ ပြေးပုန်းရတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်မ (http://nge-naing.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html) ပို့စ်မှာ ရေးထားသေးတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း အချက်အလက်ကို သုတေသနပြု သေသေချာချာ မလေ့လာဘဲနဲ့ WHO က ကိုယ်ထင်သလို ပြောချင်ရာပြော အခြေအမြစ်မရှိ ထုတ်ပြန်ချင်ရာ ထုတ်ပြန်လို့ မရဘူး။ အကြောင်းသာ ပြန်ရပေမဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကိုတောင်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် လက်မခံတဲ့ Kelvin က ကျန်တာကိုလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။
October 8, 2010 at 12:44 AM Reply
ဟုတ်ပါပြီ ကျွန်တော်ဆက်မငြင်းတော့ဘူး။ ဒါထက်အမကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရ မယ့် address လေးပေးပါဦး၊ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တယ့် မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်လို့ပါ။
October 8, 2010 at 7:06 AM Reply
ကျွန်မ C-Box က ကျွန်မ နာမည်ကို နှိပ်လိုက်တိုင်း e-mail လိပ်စာပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ သိပ်မသိပါဘူး။ ကျန်းမာရေးပညာပေးတော့ ကျန်းမာရေး/ဇီဝသိပ္ပံခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။
October 12, 2010 at 4:55 AM Reply
တစ်ယောက်ဆို မူးလာရင် ၀က်သားလည်းစားပါတယ်။
ထိုထို ကုလားများနှင်. ကျနော်ကတော. ခဏခဏ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဆန်ပြီး ကျနော်နှင်. အရက်တူတူသောက်လို.ရသော ကုလားများကို ခင်၏
အရက်နှင်.၀က်သားကို ရွံသော ကုလားများကိုတော.
မခင်ပါ ။ ကျနော်တို. ၀က်သားစားတာကို မကြိုက်သော
အပြစ်မြင်သော ကုလားများကိုတော. အလွန်မုန်းပါသည်။
October 14, 2010 at 9:33 AM Reply
October 18, 2010 at 2:27 AM Reply
I am July who currently live in UK and sorry for interrupting to all of you.I will share my experience in the whole my life.I metalot of Muslim around the world and I seen onlyafew peoples were good but very rare.I used to live in Thailand for more than 15 years I sawalot of Pakistanis making trouble and mess up all the time and so rude. so we Burmese have always fighting with them.They are cheater,liar,rude,cruel,aggressive and more.i asked one of my friend that their corum alcohol is most big trouble than eating pork.but most of Muslim drinking alcohol is look like not making problem or trouble and but very scare for eating pork.why and somebody said to me if they don't have meet then they can eat the pork.When I am in yangon 2004 I heard fromalot of people that muslim people if they got burmese girls women they will get support from mosque depand on what type of woman he got and it's mean what education and qualification.That's true and believe me.I am 39 years old and living in abroad more than 20 years.Also when I am UK I also sawalot muslim who making trouble all the time, always aggressive. so we have always fighting, we burmese never ever coward and will not tolerate to that kind of peoples who making bully or cheating, only looking for benefit from other person,aggressive.I sawalot of Iraqi,Iranian,Pakistani,Afghanistan, very noisy and complaint peoples in all my life.In Iraq there has other ethnic group call Kurdish are very very low class and always making trouble.the person like me never surrender and tolerate to who making problem with me,that's why we have always fighting,if i can't solve the problem by my self i will have help from people.so i don't scare to against them.most of them are terrorist behavior so I can't accepted that.I ask one of Iranian that he told me their country is control by religion and not freedom.very strict and anything making wrong they will be punished too big,for other religion in their country could be killed if they do not accepted to muslim.even their own people could be killed if they do such as girl photo in the room or something. I can't explain well and everything and not good typing english and burmese so i will stop here.so think about it with your mind.if you are young now,may be you will know later,when you are getting older or experience in abroad.I would like to asked you who thought Muslim is good have you ever met that kind of person in your life of you never met yet.if not you will see them when you are on right time.
January 19, 2012 at 12:15 AM Reply
- မင်းက စိတ်ရောဂါ ရှိတဲ့သူနဲ့တူတယ်။ ပါးစပ်က ပြောနေမယ့်အစား မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လက်တွေ့တစ်ခုလောက် လုပ်ပြပါလား
- လမင်းကိုခွေးဟောင် လရောင်မနွမ်း ခွေးသာပမ်း၏
my homepage :: yellow pages ad for appliance repair Temple Terrance
May 25, 2013 at 1:00 AM Reply
Here is my web site Bench Craft Company online advertising